I-United Arab Emirates - Umhlahlandlela Wama-expats | I-Dubai ne-Abu Dhabi
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at September 27, 2019
I-United Arab Emirates - Umhlahlandlela kwama-Expats. I-Abu Dhabi inkulu kunawo wonke ama-emirates ayisikhombisa anendawo engamakhilomitha-skwele angama-67,340, alingana namaphesenti we-86.7 wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi. Inogu lolwandle olwedlula amakhilomitha angaphezu kwe-400 futhi ihlukaniswe izinjongo zokuphatha zaba izifunda ezintathu ezinkulu.
Isifunda sokuqala sihlanganisa idolobha lase-Abu Dhabi okuyilona dolobha elikhulu le-emirate kanye nenhloko-dolobha. USheikh Zared, uMongameli we UAE uhlala lapha. Izakhiwo zephalamende lapho ihlangana khona i-federal ihlangana, iningi lezongqongqoshe kanye nezikhungo, amanxusa angaphandle, izindawo zokusakaza umbuso, kanye nezinkampani eziningi zikawoyela nazo zitholakala e-Abu Dhabi, okubuye kube yikhaya leYunivesithi yaseZared kanye nePhakeme. Amakolishi weTekhnoloji.
Izikhungo ezinkulu zokwakhiwa kwengqalasizinda zibandakanya iMina (Port) Zared ne-Abu Dhabi International Airport. Leli dolobha liphinde libe nezindawo ezibanzi zamasiko, ezemidlalo nezokungcebeleka, kanye ne-Abu Dhabi Corniche enjiniyela emangalisayo enikeza amakhilomitha amaningi okuhamba ngaphandle kobungozi, ukuhamba ngamabhayisekili, ukugijimela nokugudla ulwandle ogwini lwesiqhingi sase-Abu Dhabi. Ukukhuluma ngokwakhiwa kwedolobha nakho kuyamangaza indawo lapho izakhiwo ezindala ezinjengama-mosque amancane ziye zalondolozwa futhi zihlala ngokunethezeka emthunzini wezikebhe zanamuhla zesikhathi esizayo.
Isifunda sesibili sika-Abu Dhabi, esaziwa ngokuthi yi-Eastern Region, sinenhloko-dolobha yaso i-Al Ain. Le ndawo evundile inothile oluhlaza okotshani onamapulazi amaningi, amapaki omphakathi nezindawo ezibalulekile zemivubukulo. Kubusiswa futhi ngezinsizakusebenza ezinkulu zamanzi aphansi komhlaba ezingena emithonjeni eminingi yobuciko. Izimpawu ezithakazelisa kakhulu kulesi sifunda yi-Ain Al Faydah Park, Jebel Hafit, indawo yokuzijabulisa e-Al Hili, Al Ain Zoo nase-Al Ain Museum. Lesi futhi siyisikhungo sezeSayensi kanye nezezifundo kanye nesiza saseyunivesithi yokuqala ye-UAE, i-UAE University, okubandakanya phakathi kwamandla ayo amaningi isikole sezokwelapha esisebenzayo. Ezokuthutha zangaphakathi zivunyelwa yinethiwekhi yomgwaqo ebabazekayo kanti i-Al Ain ixhunyiwe emhlabeni wangaphandle ngokusebenzisa i-Al Ain International Airport.
I-United Arab Emirates - Umhlahlandlela Wama-Expats!
Isifunda sase Ntshonalanga e-UAE
Isifunda saseWestern, isigaba sokuphatha sesithathu sabaphathi, sakhiwe amadolobhana we-52 futhi sinenhloko-dolobha yaso iBida Zayed, noma iDolobha laseZared. Ukuqunjelwa okwandisiwe kumboza okungenani amahektha we-100,000, kufaka phakathi ama-evergreens angaphezu kwezigidi ezingama-20. Amasimu amakhulu kawoyela aphesheya kwezilwandle atholakala lapha, njengoba kunendawo yokuhlanza uwoyela enkulu kunazo zonke kuleli, e-Al Ruwais.
Phezu kwezifunda ezintathu ezise-Abu Dhabi kukhona iziqhingi eziningi ezibalulekile phakathi kwama-emirate kufaka phakathi iDas, Mubarraz, Zirku kanye ne-Arzanah, eduze nalapho kutholakala khona amasimu amakhulu kawoyela olwandle. Eduze nolwandle kukhona iDalma, Sir Bani Yas, Merawah, Abu al-Abyadh neSaadiyat, kanye nezinye iziqhingi eziningi.
I-Emirate ye Dubai inwebeka ogwini lwase-Arabian Gulf lwe-UAE cishe amakhilomitha we-72. IDubai inendawo c. Amakhilomitha skwele we-3,885, alingana namaphesenti we-5 wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Idolobha lase-Dubai yakhelwe ngasemaphethelweni we-10-kilometer emide, efaka umoya ohlukanisa ingxenye eseningizimu yeBur Dubai, inhliziyo yendabuko yedolobha, ukusuka endaweni esenyakatho neDeira.
Ihhovisi le-Ruler, kanye namahhovisi amaningi ezinkampani ezinkulu, iPort Rashid, iDubai World Trade Center, amasiko, iziteshi zokusakaza kanye neziphathimandla zeposi zonke ziseBur Dubai. IDeira iyisikhungo sezentengiselwano esisebenzayo esiqukethe uhla olukhulu lwezitolo, izimakethe, amahhotela kanye neDubai International Airport. IBur Dubai neDeira zixhunyaniswe namabhuloho e-Al Maktoum ne-Al Garhoud, kanye nomhubhe we-Al Shindagha odlula ngaphansi komfula.
IJebel Ali, ikhaya lesikhumulo esikhulu esenziwe ngabantu, inendawo enkulu kunazo zonke yokuhweba mahhala ezindlini zase-Arabia uhlu olukhulayo lwezinkampani zamazwe omhlaba ezisebenzisa indawo yokukhiqiza nanjengendawo yokwaba kabusha.
IJumeirah beach iyindawo enkulu yezokuvakasha enamahhotela amaningi abamba umklomelo nezindawo zemidlalo.
E-Inland, idolobha elisezintabeni laseHatta liyindawo ekhanga kakhulu. Eduze kwechibi echibini, iHatta Fort Hotel isethwe endaweni ebanzi yepaki futhi inikezela isisekelo esihle sokubuka i-wadis nezintaba eziseduze, ezingena endaweni ye-Omani.
I-Emirate yaseSharjah inwebeka cishe ngamakhilomitha angama-16 oGwini olusogwini lwe-UAE nangamakhilomitha angaphezu kwe-80 angaphakathi. Ngaphezu kwalokho kunezindawo ezintathu zokuvalelwa zikaSharjah ezisogwini olusempumalanga, nomngcele weGulf of Oman. Lawa nguKalba, Khor Fakkan noDibba al-Husn. I-emirate inendawo yamakhilomitha-skwele angama-2,590, elingana ne-3.3 amaphesenti wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Idolobha elikhulu laseSharjah, elibheka i-Arabian Gulf, liqukethe izikhungo zokuphatha eziphambili nezentengiso ndawonye nethimba elihlaba umxhwele lezinhlelo zamasiko nezendabuko, kubandakanya iminyuziyamu eminingana. Izimpawu ezihlukanisayo yilezo eziyisikhumbuzo ezinkulu ezimbili ezimboziwe, ezibonisa ukwakhiwa kwamaSulumane; izindawo eziningi zokuzijabulisa namapaki omphakathi njenge-Al Jazeirah Fun Park ne-Al Buheirah Corniche. Leli dolobha liyaphawuleka nangama-mosque alo amaningi amahle. Ukuxhumana nezwe elingaphandle kuhlinzekwe yiSharjah International Airport nePort Khalid.
ISharjah ihlanganisa nezindawo ezibalulekile ze-oasis, edume kunazo zonke okuyiDhaid lapho kutholakala khona imifino ebanzi nezithelo emhlabathini wayo ocebile futhi ovundile. IKhor Fakkan ihlinzeka ngeSharjah ngesikhumulo esikhulu solwandle osempumalanga. Iziqhingi ezimbili ezingaphesheya kwezilwandle zingeSharjah, i-Abu Musa, ebilawulwa amasosha yi-Iran kusukela nge1971, kanye noSir Abu Nu'air.
I-Ajman, nebanga elifushane kude ngasenyakatho-mpumalanga yedolobha elikhulu laseSharjah, ine-16-kilometer enhle yolwandle lwesihlabathi esimhlophe. Kungukuhamba okuncane ngokuya ngosayizi wayo ophathekayo, ukumboza cishe amakhilomitha skwele we-259, okulingana namaphesenti angu-0.3 wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Inhloko-dolobha, i-Ajman, inenqaba engokomlando enkabeni yayo. Lokhu kusanda kuvuselelwa futhi manje sekunomnyuziyamu ohehayo. Ngaphezu kwehhovisi loMbusi, izinkampani ezahlukahlukene, amabhange kanye nezikhungo zezentengiso, i-emirate nayo ibusisiwe ngetheku lemvelo lapho iPort of Ajman itholakala khona. IMasfut iyidolobhana lezolimo elisezintabeni i-110 amakhilomitha eningizimu-mpumalanga yedolobha, kuyilapho indawo yaseManama ilele kumakhilomitha acishe abe ngu-60 ngasempumalanga.
I-Emirate yase-Umm Al Qaiwain, enogu lolwandle olufinyelela kumakhilomitha angama-24, itholakala ogwini lwe-Arabian Gulf e-UAE, phakathi kweSharjah eningizimu-ntshonalanga, neRas al-Khaimah ukuya empumalanga esenyakatho. Umngcele waso ophakathi nezwe ungamakhilomitha angama-32 ukusuka ogwini olukhulu. Indawo ephelele ye-emirate icishe ibe ngamakhilomitha-skwele angama-777, alingana ne-1 amaphesenti wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Idolobha lase-Umm Al Qaiwain, inhloko-dolobha ye-emirate, lisendaweni enamaphethelo amancanyana ebiyelana nekhilomitha elikhulu lomfula u-1 ububanzi ngamakhilomitha angama-5 ubude. Ihhovisi le-Ruler, izikhungo zokulawula nezentengiso, itheku eliyinhloko kanye neMarkic Research Center lapho kutholakala khona izihlwathi nezinhlanzi ngokwesisekelo sokuhlola. Idolobha libuye libe nezinsalela ezigciniwe zenqaba yakudala, isango layo eliyinhloko ligcwele izikebhe zokuzivikela.
IFalaj al-Mualla, i-oasis yemvelo ekhangayo, itholakala kumakhilomitha angama-50 ngaseningizimu mpumalanga yedolobha lase-Umm Al Qaiwain. Isiqhingi saseSinayah, esisebangeni elincane kude nolwandle sinezindawo ezibalulekile zezihlahla zemihlume kanye necala lokuzalela lamaSorotra cormorants.
I-Ras Al Khaimah, indawo esenyakatho kakhulu e-UAE ngasogwini olusentshonalanga, inogu olungamakhilomitha angama-64 ohlangothini lwe-Arabian Gulf, ixhaswe yi-hinterland evundile, enendawo ehlukile ekujuleni kwenhliziyo yezintaba zaseHajar ngaseningizimu nasempumalanga. Zombili lezi zingxenye zemingcele yabelana ngemigwaqo nge-Sultanate of Oman. Ngokwengeziwe endaweni yayo enkulu, iRas Al Khaimah inezindawo eziningi zeziqhingi kufaka phakathi iGreater and Lesser Tunb, ethathwa yi-Iran kusukela nge1971. Indawo emirate ingamakhilomitha-skwele angama-168, elingana ne-2.2 amaphesenti wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Idolobha laseRas Al Khaimah lihlukaniswe izigaba ezimbili nguKhor Ras Al Khaimah. Esigabeni esisentshonalanga, esidume ngokuthi i-Old Ras Al Khaimah, kukhona iRas Al Khaimah National Museum neminye iminyango kahulumeni. Ingxenye esempumalanga, eyaziwa njengo-Al Nakheel, inamahhovisi we-Ruler, iminyango eminingana kahulumeni nezinkampani zezentengiso. Lezi zingxenye ezimbili zixhumeke ngebhuloho elikhulu elakhiwe ngaphesheya kweKhor.
IKhor Khuwayr yindawo yezimboni etholakala cishe amakhilomitha ayi-25 enyakatho yedolobha laseRas Al Khaimah. Ngokungezelela usimende wayo omkhulu, amatshe amatshe amatshe kanye nemabula, futhi yindawo yePort Saqr, imbobo yokuthumela ethe xaxa ye-emirate kanye nesifunda sendabuko sokudoba samaRams. IDisdagga District, ngakolunye uhlangothi, iyindawo yezolimo eyaziwayo futhi inemboni yezokwelapha eseJulphar, enkulu kunazo zonke e-Arabian Gulf.
Ezinye izikhungo ezibalulekile phakathi kwabahambeli zifaka phakathi: i-Al-Hamraniah, isikhungo sezolimo kanye nendawo yeRas Al Khaimah International Airport, Khatt, indawo yokuvakasha eyaziwa ngokuthi yiziphethu zayo ezishisayo, iMasafi eyaziwa kakhulu ngezingadi zayo kanye neziphethu zemvelo. neWadi al-Qawr, isigodi esikhangayo ezintabeni zaseningizimu.
Ngaphandle kokufaka kwezinye izinto ezincane zesonto likaSharjah, iFujairah ukuphela kwalezo zihlahla ezakhiwe eduze kweGulf of Oman. Ugu lwayo lungaphezu kwamakhilomitha angama-90 ubude futhi indawo yalo amasu ibambe iqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwayo. Indawo emirate ingamakhilomitha-skwele angama-1165, elingana ne-1.5 amaphesenti wendawo yonke yezwe, ngaphandle kweziqhingi.
Idolobha laseFujairah, inhloko-dolobha yezamnyama, liyisikhungo esithuthuka ngokushesha esiqukethe ihhovisi loMbusi, iminyango kahulumeni, izinkampani eziningi zezentengiso kanye namahhotela amaningi, kanye nesikhumulo sezindiza kanye nePort of Fujairah, enye yezindawo ezihamba phambili emhlabeni kawoyela amachweba.
Izici ezibonakalayo zomhambili zibonakaliswa izintaba zaseHajar ezixakile ezigudle umfula ugwadule oluvundile lapho indawo enkulu yenzeke khona. Ubusiswe ngokubabazekayo okubabazekayo, uFujairah usesimweni esihle sokuqhubeka nokwakha ekuhwebeni kwakhe kwezokuvakasha. Ukuheha kufaka phakathi ezinye izingosi ezinhle kakhulu zokudonsela phansi, ubuhle bemvelo bezintaba nosogwini, ukuheha amasiko kanye nomlando, futhi, ukukhanya kwelanga okunobusika okuthembekile.
Idolobhana eliyingqophamlando laseDibba al-Fujairah, emaphethelweni asenyakatho nababusi, liyisizinda esibaluleke kakhulu kwezolimo nakokudoba, kanti idolobhana laseBidiya linamasonto ama-mosque amane ahlukile kunawo amadala ezweni.
Kwenzekani uma ubhalisa Dubai City Inkampani
Ngaphansi kohlelo lukahulumeni lwe-UAE, uMongameli weFederal uqokwa ngumzimba owaziwa njengoMkhandlu oPhethe wababusi. UMkhandlu Ophakeme uyinhlangano ephezulu yokwenza izinqubomgomo e-UAE, kanti uMongameli nePhini likaMongameli bakhethwa bobulungu babo ngenxa yemigomo yeminyaka emihlanu evuselelekayo.
UMkhandlu oPhethe unamandla womthetho nawokuphatha womabili. Ngaphezu kokuhlela kanye nokwamukela imithetho yemifelandawonye, ​​uMkhandlu oPhezulu uvuma uNdunankulu oqokiwe njengoMongameli futhi uhlome ukwamukela ukwesula kwakhe, uma kudingeka.
UNdunankulu uqokwa nguMongameli. Ube eseqoka uMkhandlu Wongqongqoshe, noma iKhabhinethi, ukuba wengamele ukuthuthukiswa kanye nokuqalisa kwenqubomgomo yenhlangano kuwo wonke amaphothifoliyo kahulumeni.
Ngaphezu koMkhandlu Ophakeme noMkhandlu Wongqongqoshe, iphalamende elinamalungu e-40 elaziwa ngokuthi yiFederal National Council (FNC) nalo lihlaziya umthetho omusha ohlongozwayo futhi linikeze nezeluleko kwiKhabhinethi ye-UAE, njengoba kudingeka. I-FNC inikwe amandla okubiza kanye nokubuza oNgqongqoshe mayelana nokwenza kwabo, ukuhlinzeka ngezinga elithile lokuziphendulela kulolo hlelo. Intuthuko edabukisayo yokuvula izinqumo yenziwa ngoDisemba 2006, ngokhetho lokuqala engaqondile lwamalungu e-FNC. Phambilini, wonke amalungu e-FNC aqokwa Ababusi be-Emirate ngayinye.
Ukwethulwa kokhetho olungaqondile kubonisa ukuqala kwenqubo yokwenza uhlelo lukahulumeni lwe-UAE lube ngesimanje. Ngaphansi kwalokhu kuguqulwa, ama-Rule Rule ngamanye akhetha ikolishi lokhetho elinamalungu alo aphelele e-100 liphindwe kabili inani lamalungu e-FNC aphethwe yi-Emirate. Amalungu ekolishi ngalinye abe esekhetha ingxenye yamalungu e-FNC, kanti enye ingxenye iyaqhubeka nokuqokwa nguMbusi ngamunye. Le nqubo iholele ku-FNC lapho ingxenye eyodwa kwezihlanu zamalungu ayo ingabesifazane.
Izinhlelo ezizayo kulindeleke ukuthi zikhulise usayizi we-FNC futhi ziqinise ukusebenzisana phakathi kwawo noMkhandlu Wongqongqoshe, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle, ukubika kanye nesimo sikahulumeni sokubamba iqhaza kwi-UAE. NgoNovemba 2008, amagama amalungu e-FNC anwetshiwe esuka eminyakeni emibili kuya kwemine, ehambisana kakhulu nezinye izinto zomhlaba. Ngaphezu kwalokho, uhulumeni uzobika ku-FNC mayelana nezivumelwano neziphakamiso zamazwe aphakanyisiwe, futhi lezo zivumelwano zizoxoxwa yi-FNC ngaphambi kokuqinisekiswa kwazo.
Ngokomlando, indawo yezepolitiki ye-UAE iboniswe uthando olukhulu ngobuholi bezwe nezikhungo zikahulumeni. Lokhu ikakhulukazi kuphendula ukukhula okuthuthukile kanye nentuthuko i-UAE eye yabhekana nayo ngaphansi kokuholwa yiyo emashumini eminyaka amuva.
Umlando we-UAE neGugu
Umuntu uthathe umhlaba manje owaziwa njenge-United Arab Emirates (UAE) amakhulu ezinkulungwane zeminyaka futhi, impela indawo leyo kungenzeka ukuthi yabamba iqhaza elibalulekile ekufudukeni kokuqala kukaMuntu esuka e-Afrika aye e-Asia. Ngokuhamba kwesikhathi imvelo yashintsha kakhulu. Eminyakeni eyi-7500 eyedlule, isimo sezulu besingalingani futhi kunobufakazi obukhona bokuhlala kwabantu, kepha cishe izimo ze-3000 BC bezingasasebenzi kakhulu, ngomphumela wokuthi ezolimo zazivunyelwe imiphakathi enezivikelo eziqinile.
Ukuhweba ngempahla kwasungulwa kusukela ekuqaleni futhi ithusi lahanjiswa lisuka ezintabeni zase Hajar layiswa ezikhungweni zedolobha enyakatho ekuqaleni kwe 3000 BC, lisuka lapho lathunyelwa eMesopotamia. Imizila yokuhamba kwamakamela enqamula esifundeni ukusuka enyakatho kuye eningizimu nayo inikeze enye indlela eya eNdiya. Amachweba anjengoJulfar (uRa-al-Khaimah) agcina esanda ukuchuma, ngenxa yezentengiselwano ezinkulu kakhulu.
Ngekhulu leshumi nesithupha, ukufika kwamaPutukezi eGulf kwabangela ukuphazamiseka okukhulu kumachweba asempumalanga nasogwini anjengeDibba, Bidiyah, Khor Fakkan naseKalba. Kodwa-ke ekuqaleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye, isizwe sendawo, iQawaisim, sasizakhele umkhumbi wemikhumbi emikhulu engaphezu kwamashumi ayisithupha kanye namatilosi acishe abe yi20,000 - okwanele ukucunula iBrithani yokulawula izindlela zokuhweba zasolwandle phakathi kweGulf neNdiya.
Umthombo Imilomo ye-Old Dubai
Ngama-1790s akuqala, idolobha lase-Abu Dhabi lase laba yisikhungo sokubukeka esihle kangangokuba umholi wezizwe zakwaBani Yas, isakhamizi se-Al Bu Falah (inzalo yakhe, i-Al Nahyan, ababusi abakhona baka-Abu Dhabi), wathuthela lapho usuka eLiwa Oasis, amanye amakhilomitha e-150 ukuya eningizimu-nentshonalanga. Emashumini eminyaka kamuva, amalungu e-Al Bu Falasah, elinye igatsha leBani Yas, azinza ngasemfuleni eDubai, lapho aqhubeka khona nokubusa namuhla njengomndeni wakwa-Al Maktoum.
Ukudotshwa kukaPearl kwaqhubeka ukuchuma, kepha ekugcineni iMpi Yezwe yokuQala, ukudangala komnotho kwama-1930s, kanye nokusungulwa kweJapan ngaleli elikhanyayo kwenza ukuhweba kwehla - kwaba nomthelela omubi emnothweni wesifunda.
Ngama-1950s, nokho, kwatholakala ukutholakala kwamafutha, kwathi kwi-6 Agasti 1966, His Highness (HH) USheikh Zared bin Sultan Al Nahyan waba uMbusi ka-Abu Dhabi. Yaqala kanjalo-ke inkathi yokuhlela okukhulu nentuthuko, lapho u-Abu Dhabi, futhi ekugcineni nayo yonke i-UAE, aqala ukuhlangana nomhlaba wonke maqondana nesimanje kanye namandla ezomnotho. Nge-2 ngo-December 1971, umanyano womthethosisekelo wezwe eziyisithupha owaziwa njenge-United Arab Emirates wasungulwa ngokusemthethweni. Lokhu bekubandakanya i-Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, noFujairah. USheikh Zared wakhethwa njengoMongameli kanye noHH Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, uMbusi waseDubai, njengePhini likaMongameli. Umhambuma wesikhombisa, uRa's al-Khaimah, ujoyine i-Federation e1972.
Akungatshazwa ukuthi ukuchuma, ukuvumelana nentuthuko yanamuhla ebonakala e-UAE, ngezinga elikhulu kakhulu, ngenxa yendima eyakhiwe edlalwa obaba besifunda. Ku-2004, uSheikh Zared wangena esikhundleni sokuba nguMongameli we-UAE nanjengoMbusi wase-Abu Dhabi yindodana yakhe endala, uHH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Imigomo nefilosofi ayiletha kuhulumeni, noma kunjalo, isasenhliziweni ye-Federation nezinqubomgomo zayo namuhla. Ngemuva kokushona komfowabo, uSakhile Maktoum, e2006, uHH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uMbusi waseDubai, wakhethwa njengePhini Likamongameli kanye noNdunankulu wase-UAE.
Umthombo: INcwadi Yonyaka ye-UAE2010 - I-UAE National Media Council
Ubuholi bezepolitiki be-UAE busebenza ngaphakathi kohlaka olubanzi lwenqubomgomo yezangaphandle olusungulwe nguMongameli owasungula i-Federal, HH Sheikh Zared bin Sultan Al Nahyan. Le ndlela igcizelela ukubusa, ukuxoxisana nozwela. I-UAE ikhumbula ukuzibophezela kwayo komakhelwane bayo nasemphakathini waphesheya mayelana nokuthula kwesifunda, ukuzinza nokuphepha kwabo bonke. Ukufeza lezi zinhloso, kukhuthaze ngenhloso amabhuloho, ukubambisana nokuxoxisana. Ukuthembela kulawa mathuluzi wokuzibandakanya kuvumele uHulumeni ukuthi alandele ubudlelwane obusebenzayo, obunokulinganisela nobubanzi nomphakathi wamazwe omhlaba.
Umgomo oqondisayo wenqubomgomo yezangaphandle ye-UAE inkolelo yesidingo sobulungiswa ekusebenzisaneni kwamazwe phakathi kwezifunda, kubandakanya isidingo sokuhlonipha umthetho wokungaphazanyiswa ezindabeni zobukhosi bezinye izizwe. I-UAE futhi izimisele ekuxazululeni ngokuthula kwezingxabano, futhi isekele izikhungo zamazwe omhlaba ukuqinisa umthetho wokuphathwa komthetho wamazwe omhlaba kanye nokuqalisa ukusebenza kwezivumelwano nezivumelwano.
Enye yezinto ezisemqoka zenqubomgomo yezangaphandle ye-UAE kube ukwakhiwa kobudlelwano obusondelene nomakhelwane bayo ePhalamende lase-Arabia ngokusebenzisa uMkhandlu Wokubambisana We-Gulf onamalungu ayisithupha (GCC). Ngesikhathi se-2009, intuthuko ePalestine, e-Iraq, e-Iran, e-Yemen, e-Afghanistan nasePakistan futhi imizamo edingeka ukubhekana nazo yakha umongo wokuxoxisana kwe-UAE nabaholi bomhlaba. I-UAE ibekelwe ukuthula, ezokuphepha kanye nokuzinza esifundeni sama-Arabhu, kanye nokwenziwa ngokwejwayelekile kobudlelwano phakathi kwawo wonke amazwe, kanye nekhambi elilungile nelingapheli lesingxabano ye-Middle East. Kukholwa ukuthi ukuthula akunakutholakala ngenkathi ukuhlalwa kwabantu kwa-Israeli kwePalestine nakwamanye amazwe ase-Arab kuyaqhubeka. Ixhasa ukuqedwa kokuhlala kwe-Israyeli kanye nokusungulwa kwezwe elizimele lePalestina, ne-East Jerusalem njengenhloko-dolobha yalo, ngaphakathi komongo wesivumelwano esuselwa ku-Arab Peace Initiative.
I-UAE isinxuse kaningi isenzo samazwe omhlaba sokukhulula ukwakhiwa kwezindawo zokuhlala zamaJuda eWest Bank naseJerusalema ngenhloso yokuvuselela inqubo yokuthula yaseMiddle East. Ngaleso sikhathi, isigxekile ulaka lwakwa-Israyeli eGaza futhi lwaveza ubumbano namaPalestina athinteka kuleyo mpi. I-UAE inikeze ngaphezulu kwe-Dh11 billion (i-US $ 3bn) ukusiza amaPalestine, kubandakanya imali yokuthuthukisa yengqalasizinda, izindlu, izibhedlela kanye namaphrojekthi ezikole. Ngaphezu kwalokho, izwe linikele nge-Dh638.5 million (US $ 174mn) ekwakheni kabusha iGaza.
I-UAE ibingumsekeli osebenzayo woHulumeni wase-Iraq futhi inxuse inhlonipho ngobuqotho bezwe lonke lase-Iraq, ubukhosi kanye nokuzimela kwayo. I-Federal inelinye lamanxusa ambalwa ase-Arab abasebenza kanye nenxusa labahlali eBaghdad, futhi ikhanseli izikweletu ezibiza cishe nge-Dh25.69 billion (US $ 7bn) yokuxhasa imizamo yokwakhiwa kabusha kwe-Iraq. Naphezu kwengxabano ende ne-Iran ngombuzo weziqhingi ezintathu ezihlaselwe yi-UAE nokukhathazeka ngohlelo lwenuzi lwe-Iran, i-UAE igcine ivule yonke imigudu yokuzibandakanya eyakhayo engaholela enqubekweni yezinyathelo zokwakha ukuzethemba kanye nokusombulula ukuthula kwabo bonke izingqinamba ezivelele. I-Federation iyaqhubeka nokufaka isandla ngendlela eyakhayo emizamweni yamazwe aphesheya okuhloswe ngayo ukuqinisa i-Afghanistan futhi isekele ibhidi layo lokubuyisa ezokuphepha. Inikeze izigidi zama-US $ 550 million usizo losizo lwabantu nentuthuko phakathi kwe-2002 ne-2008 futhi ukuphela kwezwe lama-Arabhu elenza imisebenzi yezabasebenzi phansi e-Afghanistan.
Ngaphandle kwesifunda uqobo, inqubomgomo yezangaphandle ye-UAE iyaqhubeka nokuzivumelanisa nayo ukuze ikwazi ukuguqula izinguquko emphakathini womhlaba jikelele. Njengengxenye yendlela yayo ebusayo, yakha ubudlelwano obunobumbili kanye nobumbano kanye namazwe athuthukile futhi asathuthuka ngenkathi iqinisa ubudlelwano nababambisani bayo bendabuko eNtshonalanga. Isici esibalulekile senqubomgomo yezangaphandle ye-UAE sigxila kakhulu ekunakekeleni ukwanda kwezixhumanisi zokuhweba nokutshalwa kwezimali namanye amazwe nezikhungo emhlabeni jikelele. Isikhundla seFederal esikhula ngokushesha njengendawo yezimali yesifunda saseMiddle East siqinise futhi saqinisa isikhundla sayo njengelungu lomphakathi womhlaba jikelele.
Ngoba i-Asia ithathe inkinga yezomnotho yakamuva ngempumelelo kakhulu kunezinye izingxenye zomhlaba, kwaba nezinkomba ezanele zokuthi amanye amazwe amakhulu ase-Asia azodlala indima enkulu emhlabeni ezombusazwe. Ukuqonda lokhu kushintshwa, futhi kubonise isifiso sokuqinisa ubudlelwane, ubuholi be-UAE buqhubeke nokuthuthukisa ubudlelwano babo namazwe amaningi ase-Asia, kufaka phakathi iChina neNdiya. Impumelelo eyodwa yezombusazwe ngesikhathi se2009, nayo ekhombisa ukukhula kwayo kwamazwe omhlaba, yafika lapho kukhethwe u-Abu Dhabi ukuba aphathe indlunkulu ye-International Renewable Energy Agency (IRENA).
I-UAE ishicilele umqulu wenqubomgomo wamandla enuzi kubantu besizwe, sebenzisa ukugcizelela izinqubomgomo zayo ezisobala nokulungela ukuthobela zonke izindlela ezihlobene zokuphepha nezokuphepha. Ngaleso sikhathi, iBhodi Yabaphathi Bezinhlangano Zomhlaba i-Atomic Energy Agency ivume ukuqinisekiswa kwe-UAE kwezinyathelo ezingezelelekile zokuhlola i-nyukliya ezaziwa ngokuthi yiProthokholi Engeziwe, eqinisekisa ukuzibophezela Esivumelwaneni Sokwanda Kwezomnotho. Enye indawo ebalulekile yokubambisana kwe-UAE ibisemzabalazweni wembulunga yonke wokulwa nobushokobezi, kufaka phakathi ukwesatshiswa okuxhaswa uhulumeni.
Usizo Lwamanye Amazwe
Ngaphandle komthelela wobunzima bezezimali nezomnotho ezinhlelweni zezomnotho nezentuthuko esifundeni, i-UAE iyaqhubeka nezinhlelo zayo zosizo, usizo kanye nentuthuko emazweni amaningi. Imizamo yayo mayelana nalokhu yamukelwa nguNobhala-Jikelele we-UN uBan Ki-moon, oncome isimo sawo sokusiza abantu futhi basebenzela ukunciphisa ukuhlupheka kwabantu ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba ngesikhathi senhlekelele yemvelo kanye nezimpi zabantu.
I-Aids ihlelwe ngezinhlangano eziningi ezibalulekile, njenge-Abu Dhabi Fund for Development lapho, ngesikhathi se2009, yaxhasa amaphrojekthi eMorocco, Burkina Faso, Tanzania, Bangladesh, Palestine, Benin, Yemen, Afghanistan, eSudan, Eritrea nakwezinye; iRed Crescent Authority (enye yezinhlangano ezingamalungu ayishumi aphambili eKomidi Lwamazwe Ngamazwe le-Red Cross), emisebenzi yayo ephumelela kakhulu ifaka ukuhlinzeka ngamanzi okuphuza emazweni ahlaselwe yisomiso nokuchithakala, ukuhlomisa izibhedlela ezindaweni ezikude zamazwe angenasisekelo. egxile kakhulu emfundweni yezingane emazweni ampofu. Ngaphezu kwalokhu, uNoor Dubai, okuyindlela yokusiza umphakathi evikela nokwelashwa kobumpumputhe kanye nokubona okuphansi, usebenzisana neWorld Health Organisation kanye ne-International Agency for the Prevention of Blindness. Eminyakeni yamuva nje, kugcizelelwe usizo losizo kulabo abathintwe yinhlekelele yemvelo noma izingxabano nobuphofu.
Sekukonke, phakathi namashumi amathathu nesigamu eminyaka edlule i-UAE ifake isandla ngaphezulu kwebhiliyoni ye-Dh255 (i-US $ 69.4 bn), kwimalimboleko, izibonelelo nosizo inikezwa ngokwesisekelo sikahulumeni kuya kuhulumeni, i-Federation nayo nomthelela omkhulu kuma-ejensi aphesheya, njengoba enze i-Dh100 billion (US $ 27 bn) itholakale nge-International Monetary Fund kanye neBhange Lomhlaba. Ihhovisi Lokuhlanganisa Amazwe Angaphandle le-UAE, elisungulwe ngokubambisana ne-UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs, yinkundla esanda kusungulwa ezizoholela ekutheni i-Federation ibandakanyeke kakhulu ekusizeni ezingeni lamazwe ahlukahlukene, kunokuba igxile ekusekelweni ngenhlangano yamazwe omdabu. kusho.
Yize iqiniso lokuthi i-UAE manje isisendleleni yokubuyiselwa esimeni esimeme, ibe nomthelela omkhulu enkingeni yakamuva yomnotho wezwe. Ngaphandle kokubheka umgede wokuqala owenziwe ngamanani aphezulu kawoyela, i-Federation yagcina ithintekile ukwehla kwezinga lomhlaba okujulisayo okuholele ekuthini kwehle imfuno kawoyela, kudonsela amanani entengo engaphansi kwengxenye yesithathu yenani labo likaJulayi 2008. Ukuguqulwa kokuphindaphindeka kwemali eningi yezimali yangasese kuholele ekuwohlokeni okukhulu kwezindali zemakethe yesitoko. Ngaphezu kwalokho, ukwehla kwemikhakha yezokwakha neyokuphathwa kwempahla, okubaluleke kakhulu ekunwetshisweni komnotho kwe-UAE, kusho ukuthi ukukhula kwe-2009 bekuhle kakhulu kusuka eminyakeni edlule. Ngo-Okthoba 2009, uMnyango Wezomnotho wabikezela ukukhula ngephesenti le-1.3 kuphela ngonyaka.
Ukuboniswa kwe-2009 bekungafani kakhulu nalokho kwe-2008, lapho ukukhula komkhiqizo wasekhaya owenziwe nge-UAE kufinyelela kumaphesenti we-7.4. Okuholele ekukhuphukeni kwaba ngumkhakha wamafutha negesi, owanda nge-35.6 ngamaphesenti, ngenxa yokwenyuka kwamanani kawoyela. Eminye imikhakha yokukhula okuqinile e2008 ifaka imboni yezokwakha (amaphesenti angu-26.1), izimboni zokukhiqiza (amaphesenti we-17.2), isigaba sezimali (amaphesenti we-15.9), ukuthengisa okuthengiswayo kanye nezinsizakalo zokulungisa (amaphesenti we-18.7), kanye nendawo yokudlela kanye ukuhweba ngamahhotela (amaphesenti angu-15.1).
E-2008, ibhalansi yokuhweba ye-UAE inyuke ngamaphesenti ama-35.3, isuka ku-Dh170.85 billion (e-US $ 46.5 bn) e-2007 yaya ku-Dh231.09 billion (US $ 62.9), ngenxa yokunyuka okungamaphesenti ama-33.9 ngenani lezimpahla ezithengiswayo kanye nokuthengiswa kabusha kwezangaphandle kanye nokukhuphuka kwephesenti le-39.7 inani lentengo lokuthumela ngaphandle, okuhambisana nokwenyuka ngamaphesenti we-37.1 ngenani lokuthengiswa kwegesi. Izindawo zokuhweba zamahhala zibone ukukhuphuka kwamaphesenti ama-16.4 emazweni angaphandle, okufika ku-Dh97.46 billion (US $ 26.6 bn) e2008. Ngaleso sikhathi, ukuthengiswa kabusha kufinyelele ku-Dh 345.78 billion (US $ 94.2 bn); ukukhuphuka kwamaphesenti we-33.4. Ukunyuka kwesidingo sasekhaya ngenxa yokwenyuka kwenani labantu kanye namanani wemali engenayo, kanye nokukhula okuhle kuthengiso lokuthengiswa kabusha kwamanye amazwe, kusizile ukuqinisa inani lokufakwa ngaphakathi ngamaphesenti we-33.4 ukufika ku-Dh735.70 billion (US $ 200.4 bn).
Ukunyuka kwamanani ezinyangeni zokuqala eziyishumi nanye ze2009 kuma e1.7 ngamaphesenti ukusuka ezansi kakhulu eminyakeni edlule. Amanani aphansi ezindlu nezindleko zokudla zibe nomthelela ekucindezelweni kwezidingo emnothweni. Ku-2008, ukwehla kwamandla emali kumile ngamaphesenti ama-10.8, njengoba imali enkulu etholakala emananini aphezulu kawoyela ibhebhethekisa ukukhula komnotho, ukudala ukushoda kwempahla nezinsizakalo. Ngasikhathi sinye, idola elibuthakathaka laseMelika kanye namanani entengo wokudla aphakamileyo womhlaba lenze ukuthi okuthekelwayo kubize kakhulu. Umgomo oshiwo yi-UAE Central Bank bekuwukugcina amanani emalimboleko asemthethweni emazingeni aphansi ukuze kuvuseleleke ukukhula komnotho.
Imikhakha engeyona i-hydrocarbon ibala u-63 wamaphesenti e-GDP e-2008, ngaphandle kwezindleko eziphakeme zikawoyela kanye negesi, inikela nge-Dh 2.16 trillion (i-US $ 590 bn) kwezomnotho. I-UAE inethemba lokuthi izonciphisa ukunikela komkhakha wama-hydrocarbons cishe kumaphesenti ama-20 eminyakeni elishumi kuya kwe-15 ngokuqhakambisa ukukhula kwenye indawo kwezomnotho. Ezokukhiqiza nezimboni ziyaqhubeka nokuba yizici ezibalulekile zezifiso ze-Federation zokuguqulwa kwezomnotho, ezakhela kule mikhakha esele ichuma njenge-aluminium smelel, ceramics kanye nemithi yemithi.
Ku-2009, u-Abu Dhabi wembula umbono wawo we-2030 Economic Vision, ebeka imephu yomgwaqo yokuhlukanisa ngokwezomnotho okukhulu. Inkampani iMubadala Development Company, okuyindlela yokutshala imali kaHulumeni wase-Abu Dhabi, ibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwezimboni zakulesi sifunda, kubandakanya namaphrojekthi asezingeni eliphakeme (izingxenye zezindiza zezindiza) ezokukhiqiza, ezezimali kwezohwebo, amandla nezokungcebeleka. I-Abu Dhabi futhi igxile emithonjeni yamandla evuselelekayo futhi inkampani yamandla kahulumeni yesikhathi esizayo iMasdar iyingxenye ebalulekile yaleli qhinga. IMasdar City, okuyinkampani eyichaza ngokuthi 'iyidolobha lokuqala elingasebenzi ngokudonswa kwemfucumfucu okungekho embonini kanye nenhloko ye-International Renewable Energy Agency (IRENA)', ekugcineni izogcina abahlali be-40,000 kanye nabahamba nsuku zonke be-50,000 abasebenza kwezinye izinkampani ze-1500 green-energy. IMasdar nayo itshala imali kakhulu kwezobuchwepheshe ezikhula ngokushesha zamaphaneli amancane elanga, ifaka ukwakhiwa kwesitshalo e-Abu Dhabi esikwazi ukukhiqiza amaphaneli anele unyaka nonyaka ukukhiqiza ama-megawatts e-130
IDubai, ngenkathi ihlela ezinye zezinkampani zayo ezinkulu ezixhaswa ngumbuso, iyaqhubeka nokwakha amandla ayo amakhulu embonini, ezokuvakasha kanye nokuhweba. USharjah futhi uyaqhubeka nezinhlelo zokuthuthukiswa kwezimboni, kanti iRa-Khaimah Investment Authority (RAKIA) ihlela ukwethula umqondo wezindawo zezimboni ezinamagama ukuze kwakhiwe amaqembu ezindawo zokwakha. UFujairah usungula indawo ebonakalayo yamahhala, eyokuqala e-UAE, ezokwenza ukuthi izinkampani eziphethwe ngumhlaba zenze ibhizinisi okungaphansi kwalokhu okukhokhiswa yizindawo zamahhala ezisunguliwe. Ngaphezu kwalokho uHulumeni we-UAE usesigabeni sokugcina sokulungiselela umthetho wezimboni okulindeleke futhi ukuthi ukhuthaze ukwakhiwa kwezimboni zezwe lonke.
Amaphrojekthi amaningana aqediwe e-2009, esinye esihlaba umxhwele kunazo zonke njengesiqhingi saseYas, indawo yokuzilibazisa e-Abu Dhabi nasekhaya esifundeni se-Yas Marina, esingethe iFomula One Grand Prix ngoNovemba 2009. Izinhlelo ezinkulu zezingqalasizinda lapho kugcwaliswe khona, kufaka phakathi i-Dh28 billion (i-US $ 7.62 bn) i-Dubai Metro, uhlelo lokuhamba ngaphandle kokushayela olungena enhliziyweni ye-emirates; I-Sheikh Khalifa ibhuloho, exhumanisa i-Abu Dhabi Island neSaadiyat nesiqhingi sase Yas; kanye nePalm Jumeriah Monorail. Isakhiwo eside kunazo zonke emhlabeni; iBurj Khalifa eDubai, evulwe phakathi neviki lokuqala le2010.
Ezokuvakasha ziwumkhakha obalulekile wokukhula kuwo wonke umnotho we-UAE. I-Abu Dhabi ne-Dubai bobabili baye baqhubeka nokuzivocavoca kabusha, bagxile emahhotela asezingeni eliphakeme kanye nezindawo zokungcebeleka zokungcebeleka. Ukusuka endaweni yokuqothula yesiqhingi eshisayo yaseSir Bani Yas entshonalanga ne-Abu Dhabi, izindawo ezifihliwe zasogwadule zeQasr al-Sarab, eLiwa Oasis, nase-Al Maha naseBab al-Shams eDubai kuya ezindaweni ezigudle ulwandle eziseFujairah, Ra's al U-Khaimah no-Ajman, i-UAE inikeza izindawo ezinhle kakhulu kwezinye izindawo ezikude nezinhle. Amaphrojekthi weFlagship afana ne-Emirates Palace Hotel, iBurj al-Arab, iMadinat Jumeirah, kanye neBruj Khalifa asize ukukhulisa iphrofayili yezwe, ngomphumela wokuthi i-Federation inokuningi kakhulu okungakunikeza ngisho nabafuna kakhulu izivakashi. Kulindelwe izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-11.2 e-2010, zisekela impumelelo yemizamo ye-UAE yokuqinisa utshalomali embonini yezihambi.
Ukulula Ukwenza Ibhizinisi
E-2009, i-UAE yakhwela izindawo eziyishumi nane embikweni 'Wokwenza Ibhizinisi' elihlanganiswe yiBhange Lomhlaba kanye neNhlangano Yezimali Yakwamanye Amazwe. Umbiko owaziwa emhlabeni wonke uhlola amazwe ukuthi kulula kangakanani ngamabhizinisi amancane naphakathi ukuqhuba ibhizinisi. I-Federation yenyukela ezikhundleni ezingamashumi amathathu nantathu ezikhundleni zomhlaba wonke zokuguqulwa kwezomthetho, ngokwengxenye ngenxa yesinqumo sikaHulumeni sokuqeda imfuno ephakeme yedolobha eyi-Dh150,00 (US $ 40,871) yamabhizinisi athile aqala.
Ezinye izizathu ezimbili ezibalulekile zokunyuka kwe-UAE kwaba ukuhlehliswa kwenqubo ethintekayo ekutholeni izimvume zokwakha kanye nokwenza ngcono amandla eDubai amachweba.
Ukutshalwa kwezimali ezimakethe zaphesheya kwezilwandle sekuyisikhathi eside kuhlanganiswa ekuqhubeni kwamasu e-UAE ukwakha inetha lokuphepha ezizukulwaneni ezizayo, ikakhulukazi labo ngolunye usuku ababhekene nethemba lokuphelelwa yindawo yokugcina amanzi e-hydrocarbon. Phakathi kwezinhlaka ezinkulu zokutshala imali zamazwe omhlaba e-Emirates yilezi: i-Abu Dhabi Investment Authority, i-Abu Dhabi Investment Council, i-Invest AD, Inhlangano yokutshala imali eDubai, Dubai Holding, Dubai Holding Commerce Operation Group (kubandakanya iDubai Properties Group, Sama Dubai, Tatweer, Kanye neDuabi Holding Investment Group), kanye neDubai World. Ngaphezu kwalokho uMubadala, i-Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ne I-International Petroleum Inkampani Yezimali (IPIC) iphokophela ukuthuthukiswa kwamandla phesheya.
Izinyathelo ezithathwe yizikhungo zombuso e2008 zokubuyisa ukuzethemba ohlelweni lwezezimali, kufaka nesikhungo se-UAE Central Bank Dh50-billion (US $ 13.6 bn) ukweseka ababolekisi bendawo, kanye ne-AUE Ministry of Finance Dh70 billion (US $ 19 bn) Uhlelo lokusekelwa, lwenzelwe ukuvuselela ukubolekisana, ukumaketha amasheya kanye nokuqinisa umsebenzi wezomnotho. E-2008, uHulumeni Wombuso waphinde wamemezela ukuthi uzokwakha imali eyi-Dh120 billion (i-US $ 32.7 bn) etholakala emabhange ezweni lonke ngaphansi kwezinhlelo eziningi zokubolekwa, futhi iqinisekise ngokufaka imali nokubolekisana iminyaka emithathu.
NgoFebhuwari 2009, uMnyango wezeziMali i-Abu Dhabi wajova i-Dh16 billion (i-US $ 4.35 bn) emabhange amakhulu amahlanu emirate. Lezi zinyathelo zasiza ekuqiniseni amashidi wokulinganisa emabhange, yize inzuzo yamabhange yawa ngekota yokuqala, futhi kwamiswa ikomidi lezimali eliphuthumayo nguMnyango Wezomnotho ukuthi licubungule ezinye izinyathelo zokuxhasa ababolekisi.
Phakathi nonyaka, amabhange abike ngokwanda kokuzenzakalelayo kanye nezinkokhelo ezilahlekile kumalimboleko wokuhweba nawomthengi. Ngenxa yalokhu, amabhange aqokiwe e-UAE athathe indlela yokuqapha ngokubika ukuhlinzekwa okungaphezulu kakhulu kunokwejwayelekile malungana nezimali mboleko ezimbi. Ukusiza ekuqongeleleni imali eyengeziwe ohlelweni lwamabhange, i-Central Bank iyalele ababolekisi ukuthi kusukela ku-2010 kumele bahambisane nemithetho ye-Basel II yokwenelekela amabhange futhi banake kakhulu ukulawulwa kwezingozi nokuphatha. Uhulumeni uphinde wamemezela nezinhlelo zokuhlanganisa ababolekisi abakhulu bakwa-Emirates, i-Amlak neTamweel. Lokhu kubhekwa njengokubaluleke kakhulu ekubuyiselweni emakethe yezindlu.
Ukukhokhwa kwemali mboleko etholwe emakethe ngabameli abaphethwe nguhulumeni nakho bekungukugxila komsebenzi e2009. NgoFebhuwari 2009, uHulumeni waseDubai wathengisa i-Dh36.7 billion (US $ 10 bn) ngezibopho ku-Central Bank ukusiza izinkampani ngokulawula kwazo ukukhokha izikweletu futhi zikhokhele osonkontileka. Ukubheka ukusatshalaliswa kwalezi zimali, kwasungulwa iSikhwama Sokuxhaswa Kwezezimali eDubai ngoJulayi 2009. Ku-25 ngo-Novemba 2009, uHulumeni waseDubai umemezele ukuthi uqoqe imali eyi-Dh18.4 million (i-US $ 5 bn) ekuxhaseni ngezimali i-National Bank Abu Dhabi kanye ne-Al Hilal Bank, yomibili le mithetho elawulwa enye yezikhwama zezimali ezinkulu zika-Abu Dhabi. uMkhandlu Wokutshalwa Kwezimali i-Abu Dhabi. IDubai iphinde yaphatha ngempumelelo izikweletu eziningi ku-2009, kufaka phakathi i-Dh12.47 billion (i-US $ 3.4 bn) ukuphinda iphindaphindwe kwesikweletu somphathi we-Borse Dubai ngoFebhuwari kanye nokukhokhwa kwesikweletu seDh3.67 billion (US $ 1 bn) Dubai Civil Aviation Authority Isibopho samaSulumane ngoNovemba.
Amasheya abhalwe kuMakethe Yezimali yaseDubai aqede unyaka akhuphuka ngamaphesenti we-10.2, kepha ayesengaphezu kwamaphesenti we-70 phansi kusukela phezulu ngonyaka owedlule. Amasheya ku-Abu Dhabi Securities Exchange akhuphuke ngamaphesenti ama-14.7 e-2009, kepha ayesephansi ngamaphesenti we-46 kusuka kuma-2008 highs.
Ngobuncane besisindo somhlaba sabanye omakhelwane baso be-Gulf, i-UAE yize kunjalo ethunyelwa ngaphandle ngobukhulu wesifunda kawoyela ongahluziwe, ngemuva I-Saudi Arabia, I-Iran ne-Iraq.
I-UAE inezindawo zokugcina eziveziwe ezikhulukazi emhlabeni ezi-oyela ongahluziwe, kanye nezindawo zesikhombisa ezivezwe ngobukhulu zerhasi yemvelo. Yize kungumkhiqizi wamafutha amakhulu ayisishiyagalolunye kuphela emhlabeni, ngumkhiqizi kawoyela onobukhulu ngobukhulu obukhulu, kanti yiRussia kuphela neSaudi Arabia ekhipha kakhulu. Ukuthunyelwa kwayo okuluhlaza kusondela kakhulu e-Iran, naseKuwait, okukhona konke okunezitolo ezinkulu.
Ku-2009, ngenxa yokulandela izibonelo zokusulwa kwamarekhodi okufunwe yiNhlangano Yezindawo Ezihambisa Amazwe Angaphandle ePetroleum (OPEC) ukusimamisa izimakethe zikawoyela, ukuphuma kweoyile kwe-UAE kwehle cishe emigodini engama-2.3 wezigidi ngosuku (bpd) kusuka ezigidini ezingama-2.9 e2008. Ukukhiqizwa kaphethiloli kwakumi cishe ngama-7 ayizigidigidi zamamitha ngosuku. I-UAE iqhubekela phambili ngamasu wokunwebisa umthamo wokukhiqiza uwoyela negesi, kepha sandise isikhathi sokuthuthukiswa kawoyela ngenkathi ibeka phambili amaphrojekthi wegesi.
Esikhathini sokuqala kwe-2009 izindawo ezigcinelwe i-Federation ezifakazelwe yi-Federation zazimi ezinyaweni eziyizigidi eziyizigidi ezingama-227.1 - igesi eyanele yeminyaka engaphezu kwe-130 yokunikezwa ngamanani wakamuva wokukhiqiza. Phakathi kokunye, lokhu kusho ukuthi ukushoda kwegesi i-Emirates akubangelwa ukushoda kwezimali zikagesi, kodwa ngentuthuko enganele, yize izindawo eziningi ezigcinwa ngogesi zingezinhlobo ezibizayo futhi okunzima ukuzikhiqiza. I-Abu Dhabi ibaluleke kakhulu ekufukuleni amandla okukhiqizwa kawoyela negesi e-UAE, ngoba iqukethe cishe amaphesenti ama-94 ezindawo zokugcina uwoyela ze-Federal kanye namaphesenti angaphezu kwama-90 ezindawo ezigcinwe kuzo igesi. Inwebeka umthamo wokukhiqiza uwoyela negesi.
Ngaleso sikhathi, ukukhiqizwa kuka-Dubai kawoyela, okwake kwaba yingxenye yengxenye ye-GDP ye-emirate, kwehle kakhulu eqongeni labo le-1991 le-410,000 bpd; nge-2007 yayithumele ku-80,000 bpd. Ngenkathi iyaqhubeka nokumpompela igesi ephuma emasimini aphesheya kwezilwandle, i-Dubai nayo idla uphethiloli omningi kunokuba ikhiqiza, futhi kuya ngokuya kuncike ekungeniseni okwenza umehluko. I-emirate isivele ithengwe ngamamitha ayi-cubic metres ngosuku ngosuku igesi kwiDolphin Energy, inkampani i-Abu Dhabi ekhipha igesi ngamapayipi avela eQatar.
Amane ama-Emirates amahlanu asele emirates nawo anenani elincane lokukhiqiza uwoyela negesi; IFujairah ayakhiqizi i-oyili noma igesi, noma ngabe uhlelo lokuhlola i-onshore njengamanje luyaqhubeka. Kodwa-ke, ichweba lesibili ngobukhulu emhlabeni likhona ogwini lwalo. Ichweba laseFujairah, oLwandle i-Arabian, liphatha cishe amathani ayizigidi ezingama-1 ngenyanga kaphethiloli wokuhamba wasolwandle neminye imikhiqizo kawoyela. Ukufika kwe-2008 yokungeniswa kwegesi ngepayipi leDolphin Energy kusuka eQatar kusize ukuthuthukiswa kwamandla nokuqina kwamanzi embonini yasekhaya yokufukula kanye nokukhuthaza.
I-IPIC, ephethwe nguHulumeni ka-Abu Dhabi, yakha ipayipi likawoyela ongahluziwe ukuze lihambise u-150,000 bpd kawoyela ovela emasimini ase-Abu Dhabi asogwini olusetshenziselwa ukuthenga izinto ezintsha eFujairah. Le phrojekthi ihlose ukuhambisa indlela yokuthumela i-Abu Dhabi engahlanzekile edlula endaweni eshaya phansi olwandle i-Gulf eStrait of Hormuz. Ihlelelwe ukuqedelwa e-2010, ngokuthunyelwa kwamathangi okokuqala kusuka kuFujairah okulindelwe ekuqaleni kwe-2011. I-IPIC ibuye ithuthukise nendawo yokucoca i-oyili kanye nendawo yokugcina izinto ethekwini laseFujairah.
Cishe amaphesenti ama-10 omhlaba wonke wokuhlinzekwa kwezindawo zokugcina kawoyela ongaqinisekisiwe kanye nezindawo zemvelo ezinhlanu zokugcina igesi yemvelo, i-UAE ingumlingani obucayi nomhlinzeki onokwethenjelwa ezimakethe zamandla omhlaba. Ngenkathi ibaluleke kakhulu emnothweni, ukuthunyelwa kukawoyela manje kubhekela cishe amaphesenti ama-30 kuphela womkhiqizo ophelele wasekhaya, ngenxa yezinqubomgomo zikahulumeni ezinolaka eziklanyelwe ukuphambukisa umnotho we-UAE.
I-UAE iphishekela nezinhlelo ezivuselela amandla avuseleleka namandla kanye nokusebenza kwamandla. Ku-2005 i-UAE yaqinisekisa i-Kyoto Protocol ku-UN Convention on Climate Change, yaba elinye lamazwe okuqala akhiqiza uwoyela ukwenza kanjalo. I-Abu Dhabi isisungule nenye yezinhlelo zamandla avuselelekayo ezivuselelekayo emhlabeni kanye nezinye izindlela.
Amafutha kanye negesi Yemvelo
I-Emirate ngayinye ilawula ukukhiqizwa kwayo kawoyela kanye nokuthuthukiswa kwezinsiza. U-Abu Dhabi uphethe ngaphezulu kwamaphesenti we-90 wemithombo yamafutha e-UAE, noma ngemiphongolo eyizigidigidi ye-92.2. IDubai iqukethe imiphongolo eyizigidi eziyinkulungwane ye-4, elandelwa nguSharjah noRas al-Khaimah ngezigidigidi zama-1.5 nezigidigidi zama-100 zamafutha, ngokulandelana.
I-Abu Dhabi inomlando wokwamukela ukutshalwa kwezimali kwezinkampani ezizimele emkhakheni wayo wokuhlola owoyela negesi kanye nomkhakha wezokukhiqiza. Impela, u-Abu Dhabi wayengukuphela kwelungu le-OPEC ukuthi lingabeki amandla okubamba iqhaza kwabatshalizimali bakwamanye amazwe ngesikhathi sokuguguleka kobuzwe okwakushisa imboni kawoyela negesi maphakathi no-1970's, futhi iyaqhubeka nokuhlomula ngamazinga aphezulu okutshala imali kwezimboni ezizimele. Namuhla izinkampani zika-oyela zamazwe omhlaba ezivela e-United States, Japan, France, Britain kanye nakwamanye amazwe ziyaqhubeka nokubamba izibalo ezihlangene phakathi kwe-40 ne-100 iphesenti ekuvumelwaneni kuka-Abu Dhabi kuka-Abu Dhabi.
I-UAE ithumela amaphesenti ama-60 kawoyela wayo ongahluziwe eJapan, okwenza iklayenti elikhulu kakhulu le-UAE. Ukuthunyelwa kwamagesi cishe ngokuphelele kuya eJapan, umthengi omkhulu wegesi owenziwe utshwala emhlabeni wonke, ne-UAE ehlinzeka cishe ingxenye eyodwa kweziyisishiyagalombili yazo zonke izidingo zaseJapan.
Ngenxa yobuningi bendawo ethinta izindleko zokuhamba, abakwa-UAE bathumela inani elincane kakhulu lamafutha negesi eMelika. Noma kunjalo, i-UAE ingumhlinzeki obalulekile we-oyili negesi emakethe yamazwe omhlaba futhi okwesibili kuphela eSaudi Arabia maqondana nomthamo wokukhiqiza uwoyela owengeziwe. Ngaphezu kwalokho, amacebo anamandla we-UAE wokukhulisa umthamo wokukhiqiza azothuthukisa kakhulu ekuqedeni ikusasa, ukukhula okuqhutshwa ngamanani entengo kawoyela ongahluziwe.
Iphrojekthi yeDolphin, okungenisa igesi yemvelo ngepayipi ukusuka e-Qatar kuya e-UAE, kwakuyisivumelwano sokuqala samandla esiphakathi somngcele phakathi kwamazwe aseGulf. Le phrojekthi izokhulula igesi ka-Abu Dhabi yokuvuselelwa kawoyela ongahluziwe kanye nokuthunyelwa kwamanye amazwe. Ngethuba lePetroleum yaseMelika kanye neTotal of France ngayinye inengxenye yamaphesenti ama-24.5 okulingana kule projekthi, kanti uHulumeni wase-Abu Dhabi uphethe amaphesenti ama-51 asele. Ukulethwa kokuqala kokuthengiswa kwegesi yemvelo ye-Qatari kuqale ehlobo le-2007 futhi kuzoqhubeka kuyo yonke inkathi yeminyaka engu-30 yentuthuko kanye nokwabelana ngemikhiqizo esayiniwe noHulumeni waseQatar.
Ukuvikela Ukuhanjiswa Kwamafutha
Emizamweni yokwenza ngcono ukuphepha kwezidingo, ohulumeni be-Gulf bacwaninga ngokuthuthukiswa kwamapayipi kawoyela azodlula eStrait of Hormuz. Cishe izingxenye ezimbili kwezesihlanu zamafutha athengiswayo emhlabeni njengamanje athunyelwa ngamathangi ngale ndima ebanzi le-34.
Uma ngabe akhiwe, amapayipi angahamba cishe ngemigqomo yama-6.5 yezigidi zamafutha ngosuku noma cishe amaphesenti we-40 wenani elithunyelwa nge-Strait okwamanje. Ukwakhiwa kwepayipi lokuqala, elincane bekuzothwala uwoyela kusuka esikhungweni samafutha se-UAE sikaHabshan kuyiwe e-Emirate of Fujairah, etholakala ngaphandle komngcele eGulf of Oman.
Ukunwebeka Ukunikezwa Kwamafutha
I-UAE iyaqhubeka nokukhulisa kakhulu umkhiqizo wayo ukuhlinzeka izimakethe zamandla omhlaba. Ngenkathi ezinye izizwe ze-OPEC nezizwe eziningi ezingezona ze-OPEC zibone ukukhiqizwa kwehla kule minyaka emihlanu edlule, i-UAE ikhuphule ukukhiqizwa kwayo kawoyela ongahluthi ngamaphesenti cishe we-31. Akukapheli unyaka kuleso sikhathi ukukhiqizwa okuphakathi konyaka kwehle ngaphansi konyaka owedlule.
Ukuguqukela esikhathini esizayo, izinhlaka ezikhuphuka zikawoyela kanye negesi ku-UAE ziyaqhubeka nokuthola amaphrojekthi amasha ahlose ukukhulisa amandla kazwelonke wokukhiqiza uwoyela ku-4 million umphongolo ngosuku nge-2020, okungaba ukwanda okwengeziwe kwamaphesenti we-40 ngaphezulu kwamanje amazinga okukhiqiza.
Ugesi: Ukunwebeka Ngokushesha Izidingo
Ukukhula komnotho okuthuthukayo e-UAE kuholele ekwandeni okukhulu kwesidingo sikagesi. Izilinganiso ezikhona zibonisa ukuthi isidingo samakhaya sokwedlula kabili nge-2020. Njengoba kunemikhawulo yokuthi zingakanani futhi zishesha kangakanani izinsiza zamandla endabuko, njengogesi wemvelo, zingalethwa emakethe, kanye nokukhathazeka ngokushintsha kwesimo sezulu, uHulumeni we-UAE wethule imizamo ehlukahlukene ehlose ukukhomba ezinye izindlela zokukhiqiza amandla adingekayo wokuphehla ugesi wawo ezomnotho.
I-UAE ihlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kwakhe uhlelo lokuthula lwamandla enuzi. UHulumeni we-UAE uyazi ngokuphelele imizwa ethintekayo ekufakweni kwezindlela zokuphehla amandla enuzi futhi nokuhlola okulula kokungahle kwenzeke. Ngokufanelekile, uHulumeni wase-UAE usebenze ukwenza izinhloso zawo ezinokuthula futhi zingathandeki zicace, ngokuya kokuhlolwa kwanje kohlelo lokuthula lwamandla enuzi kanye nokuhanjiswa kwalo esikhathini esizayo. Uhulumeni ukhulule umphakathi iphepha elinemininingwane ejulile, ebeka ukuthi intuthuko engaba khona yamandla enuzi ingalandelelwa kanjani ngokuphepha, ngokuphepha nangokuthula. Njengengxenye yokuzibophezela kwayo ekubonakalweni kwezinto, ekungabandeni, ezokuphepha kanye nezokuphepha, i-UAE inqume ukuthi ngeke iphishekele ukucebisa nge-uranium futhi esikhundleni salokho ithembele emakethe yamazwe omhlaba ngamandla enuzi. Kuyo yonke le nqubo, i-UAE isebenzisane kakhulu ne-International Atomic Energy Agency (IAEA) nabanye ohulumeni, kubandakanya ne-United States.
Naphezu kwendima ebalulekile yamafutha negesi ye-UAE, izwe lenze izibopho ezinkulu kakhulu kwamanye amandla. I-UAE ithatha izinyathelo zokunciphisa ukuphuma kwekhabhoni ngokusebenzisa imizamo emikhulu ku-Abu Dhabi nase Dubai.
IDubai yathuthukisa uhlelo oluhle lwemvelo oluzoqinisekisa ukuthi ukukhula nentuthuko kuyatholakala ngenkathi kuvikela imvelo. Ukuphathwa kukagesi okudingwa ngamacala kuzobamba iqhaza, njengoba kuzokwanda ukuthutha komphakathi.
I-Emirate enkulu kunazo zonke ye-UAE, u-Abu Dhabi, isibophe ngaphezulu kwe- $ 15 billion kwizinhlelo zamandla avuselelekayo. I-Masdar Initiative igcizelela ukuzibophezela kwamawele imvelo yomhlaba kanye nokwehluka komnotho we-UAE. I-Masdar Initiative igxile ekuthuthukisweni nasekuthengisweni kobuchwepheshe emandleni avuselelekayo, ukusebenza kahle kwamandla, ukuphathwa kwekhabhoni nokwenza imali, ukusetshenziswa kwamanzi kanye nokwenza i-desalination.
Abalingani be-Initiative babandakanya ezinye zezinkampani zamandla amakhulu emhlabeni nezikhungo ezikhethekile: BP, Shell, Occidental Petroleum, Total Exploration and Production, General Electric, Mitsubishi, Mitsui, Roll Royce, Imperial College London, MIT kanye neWWF. Inezinto ezine ezibalulekile: Isikhungo sokusungula ukwesekela ukukhombisa, ukuthengisa kanye nokwamukela ubuchwepheshe obuzinzile bamandla. I-Masdar Institute of Science and Technology enezinhlelo zokuthweswa iziqu kugesi ovuselelekayo nokusimama, okukuMasdar City, idolobha lokuqala emhlabeni elingenalo i-carbon, elingathathi imfucuza, elingenazimoto. Inkampani ethuthukisayo igxile ekuthengisweni kokuncishiswa kokukhucululwa kwegesi, kanye nezixazululo ze-Clean Development Mechanism njengoba kuhlinzekwe yi-Kyoto Protocol. Indawo Ekhethekile Yezomnotho ukuze ibambe izikhungo ezitshala imali kubuchwepheshe obuvuselelekayo bamandla nemikhiqizo.
Inqubomgomo Yezamandla ye-UAE
I-UAE kade yaba ngumphakeli obalulekile wamandla futhi manje iba ngumthengi ofanele wamandla ofanele futhi. Emizamweni yayo yokusheshisa ukwakhiwa kwezindawo ezongeziwe ze-hydrocarbon nasemizamweni yayo yokufaka isandla ekuthuthukisweni nasekuqalisweni kweminye imithombo yamandla, i-UAE inethemba lokuqhubeka nesiko layo elide lokuphatha amandla ngendlela efanele.
Ukulondolozwa nokuvikelwa kwemvelo ye-UAE kungenye yemisebenzi eyinkimbinkimbi kakhulu ebhekane nayo kuze kube manje. Ukushisa okuphezulu nemvula ephansi kudala izimo ezinzima, zidinga ukuzivumelanisa okukhethekile kwezilwane nezitshalo ukuze ziphile. Noma ushintsho oluncane lwesimo sezulu lungahle lube nomthelela omkhulu kuzinto eziphilayo ze-UAE. Ngaphezu kwalokho, ugu lolwandle olusezingeni eliphansi lisho ukuthi ngisho nokukhuphuka okuncane kwamazinga olwandle kungaba nemiphumela emibi esifundeni esisogwini, lapho iningi labantu abahlala kuleli lihlala khona nalapho intuthuko enkulu ehleliwe yenzeka khona. Ngempela, izifundo zesayensi zithola izimpawu zokuthi izinga lolwandle kwi-Gulf kungenzeka selikhuphukile.
Izinga labantu selikhule kusuka kuzungeze i-180,000 e1968 laya cishe ezigidini ezinhlanu namuhla. Ngenxa yalokhu, inani lomhlaba osetshenziselwa ukuhlala, ukuhweba nokusetshenziswa kwezimboni lenyuke ngokumangazayo. Ukuvuselelwa futhi ukuthuthuka kabusha i-UAE ugu lolwandle lusikhathi esifushane kakhulu. Ukunwetshwa kwengqalasizinda yeNhlangano ngendlela yezikhumulo zezindiza, amachweba kanye nemigwaqo emikhulu sekukhinyabezile kulokho obekuyindawo yokuhlala yemvelo, ngenkathi itshe lokuxabana ngenxa yokwakha libe nomthelela omkhulu kuningi lezintaba zaseHajar.
Ngaphandle kokubheka ushintsho olukhulu, uHulumeni uzibophezele ekongeni imvelo nasekutholeni ukulingana okuqhubekayo phakathi kokuvikelwa kwemvelo kanye nezidingo zentuthuko.
UMnyango Wezemvelo Nezamanzi, kanye nezinhlaka zasendaweni - okusebenza kakhulu kuzo yi-Environmental Agency u-Abu Dhabi, obhekele cishe ingxenye yesine yendawo yomhlaba we-UAE - uqhubeke nokusebenza ezinhlelweni ezisebenzayo zocwaningo lwesayensi kanye nokulungiselela kanye nokwenza imigomo nemihlahlandlela engapheli.
Imikhankaso yezemfundo yenzelwe ngosizo lwezinhlangano ezingezona ezikahulumeni ezifana ne-Emirates Wildlife Society (EWS) ukuqwashisa umphakathi ngesidingo sokuvikela imvelo nokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla namanzi.
Indawo evikelekile yase-Yasat Marine, kanye nezimbotshana zayo ezisengozini, yakhulisiwe ukuze ifake ezinye iziqhingi eziningi, futhi manje ihlanganisa indawo ecishe ibe ngamakhilomitha-skwele angama-3000. Abakwa-EWS kanye noMasipala weFujairah baphinde bamemezela iWadi Wurrayah njengendawo evikelayo. Ikhaya lasendaweni ebeka engozini i-Arabian tahr, lokhu kuyindawo yokugcina intaba ye-UAE.
Ukulondolozwa kwamanzi ahlanzekile nemithombo yezolwandle nakho kuphakeme ku-ajenda ye-UAE, ngenkathi ukungcoliswa komoya okubangelwa ukugebha amadwala nokwakha usimende kuholele ekutheni kuvalwe ukusungulwa okuthile eRa al-Khaimah naseFujairah.
Ngaphezu kwalokho i-Federation isisebenze iminyaka eminingi namanye amazwe ngesisekelo sezivumelwano zamazwe amabili ukuvikela izinhlobo ezithile, njenge-houbara bustard, ezala maphakathi ne-Asia kodwa ifudukela e-Arabian Gulf. I-UAE manje seyikhethwe njengeNdlunkulu yesivumelwano esisha samazwe omhlaba mayelana nokulondolozwa nokuvikelwa kwezinhlobo ezifudukayo zezinyoni ezidla inyama kulo lonke Europe, I-Afrika ne-Asia.
I-UAE iyinhliziyo yezentengiselwano yomkhakha wezindaba eMiddle East, esebenza njengendawo yesifunda yezinkampani zezindaba zamazwe omhlaba kanye nensimu evundile yokuthuthukisa izimboni zezindaba zasekhaya. Lo mkhakha ukhula ngokushesha ubhekelelwa yiNational Media Council, ebhekele ukukhipha amalayisense abezindaba, nokuphoqelela imithetho yezindaba, nokuqhuba umnyango wezokwazisa ongaphandle kanye ne-Emirates News Agency, WAM.
Enye yezithangami ezinkulu zabezindaba ezweni lonke i-Abu Dhabi Media Company, ephethe futhi isebenzise iziteshi eziningi zethelevishini, inethiwekhi yeziteshi zomsakazo, izincwadi eziningi (iphephandaba i-Al Ittihad, iphephandaba likazwelonke, iphephabhuku i-Zahrat Al Khaleej kanye nephephabhuku likaMajid. ) namanye amabhizinisi amaningi ahlobene nemidiya, kufaka phakathi i-Imagenation yenkampani yokuthuthukisa amafilimu, i-United Printa Press ne-Live.
Izindawo ezikhululekile zisetshenziswe ekuthuthukisweni kwabezindaba, i-CNN isisungule izindaba endaweni entsha yezokuxhumana i-Abu Dhabi e-Twofour54 eye yaheha abanye ochwepheshe abaningi bezokuxhumana. I-Dubai Media City manje inamabhizinisi angaphezu kwe-1200 abhalisiwe afana ne-CNN, i-BBC, i-MBC ne-CNBC. Lesi ngesinye sezizinda zezindawo zamahhala zemidiya eziqhutshwa yiTecom, okubandakanya iDubai Internet City, Dubai Studio City ne-International Media Production Zone. Lezi zingxenye zihlanganiswe nokwakhiwa kwezindawo ezincane zemithombo yezindaba ezinjengeFujairah Creative City neRAK Media City.
Ukukhiqizwa kwamafilimu, osezingeni lomhlaba kanye nasekhaya, kuyakhuthazeka, futhi kusekelwa izinhlangano eziningi, kufaka phakathi iDubai Studio City, twofour54, Isikhungo se-Abu Dhabi seSiko namaGugu (i-ADACH), isekethe ne-Abu Dhabi Filamu Ikhomishini.
Izincwadi, kufaka phakathi ukuhunyushwa kwemisebenzi emikhulu kusi-Arabhu, futhi kugqugquzelwa izinhlangano ezifana neKitab neKalima. Imiklomelo emikhulu yabashicileli bezincwadi ebibanjelwe e-UAE ifaka phakathi iSharjah International Book Fair esivele yasungulwa kanye ne-Abu Dhabi International Book Fair, kanti umklomelo omkhulu kunayo yonke yi-Sheikh Zared Book Award, eya kuPedro Martinez Montavez e2009.
I-Dubai Press Club ihlela, phakathi kokunye, i-Arab Media Forum, futhi isingatha ama-Arab Journalism Awards, manje osonyakeni wayo wesishiyagalombili futhi ohlanganisa izigaba eziyishumi nambili ezihlukene.
Amagugu namasiko asemqoka ekuzwaneni lukazwelonke, futhi i-UAE yenza imizamo emikhulu yokugcina amasiko ayo endabuko. Ngasikhathi sinye, i-Federation ibhekana nokuvuselelwa kabusha kwezamasiko, ngokugcizelelwa okuthile ekutshalweni kwezimali kwizinsiza ezisezingeni lomhlaba nokwakhiwa kwamabhuloho phakathi kweMpumalanga neNtshonalanga.
UMnyango Wezamasiko, Wentsha kanye Nezokuthuthukiswa Komphakathi usebenza kule mikhakha, wenza amathuba okuba abase-Emirates abasha babambe iqhaza kwezamasiko, kwezobuhlakani, kwezemidlalo nakwezokuzijabulisa, kanti futhi bekhuthaza izakhamizi ezindala ukuthi zibambe iqhaza njengabafundisi, zidlulisele ulwazi lwazo lwamasiko isizukulwane esincane.
Ukusiza ukukhuthaza ukwazisa ngomculo, i-ADACH ihlela imicimbi eminingi yomculo, kufaka phakathi i-Abu Dhabi Classics, ebisingethe i-Middle East yedolobha laseNew York Philharmonic e-2009. Umkhosi womculo weWOMAD wembulunga yonke ubuye wabanjelwa e-Abu Dhabi. Ngaphezu kwalokho, uchungechunge lwamakhonsathi oluthi 'Dubia Sound City' lube nomthelela omkhulu ku-2009. Ngokuya ngezobuciko obukwayo, ekuqaleni kwe-2009 umbukiso we-'Emirati Expression 'waveza abaculi bendawo abangamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa, kusukela kwabadwebi bezilwane kuya esizukulwaneni esisha sabathwebuli bezithombe, abaqambi bezithombe, video nabokufaka abaculi. Ngaleso sikhathi, iSharjah Biennial, Art Dubai, Art Fair neminye imibukiso eminingi yenziwa ngokubambisana nabalingani abanjengoGuggenheim Foundation, iLouvre, iYunivesithi yaseNew York i-Abu Dhabi, kanye neParis-Sorbone University Abu Dhabi. Ubuciko be-Contemporary bubuye buboniswe kahle kwimibukiso ezinikezelwe kuyo yonke i-Emirates.
Phakathi kwemizamo emikhulu yamasiko aphesheya koMnyango Wezamasiko, Yentsha kanye Nezokuthuthukiswa Komphakathi ngonyaka kwaba yinhlangano yenhlangano yokuqala ye-UAE eVenice Biennale. Eminye imisebenzi phesheya kwezilwandle ibandakanya umcimbi we-'AE Cultural Days 'okwathatha isonto lonke eBerlin kanye nombukiso wobuciko base-Emirati-Germany eJuamburg, lapho kwaqalwa khona elinye ipulani likaNgqongqoshe, iphrojekthi ye'Dialogue of Cultures'.
Ngobubanzi benkambiso yamasiko, iminyuziyamu esezingeni lomhlaba efana neGuggenheim Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, kanye ne-Sheikh Zared National Museum ziyaqhubeka. Ngaleso sikhathi, uMnyango weminyuziyamu osungulwe kahle waseSharjah wengamela iminyuziyamu eyishumi nesikhombisa kanye nezikhungo zamasiko, kubandakanya nomnyuziyamu omusha omangalisayo wempucuko yamaSulumane.
Isifiso sokuthuthukisa izinga le Ukuphila wabantu bayo kanye nenhlala-kahle yomphakathi iqhube inqubomgomo enkulu kahulumeni - hhayi nje mayelana nentuthuko yezomnotho, kepha futhi nezindaba zezenhlalo. Eminyakeni emibalwa nje, izinguquko ezinkulu zenhlalo zenzekile emphakathini owawukade ungowokuzalwa okukhulu; kuyimpumelelo emangazayo, naphezu kwalesi siphazamiso esikhulu, ukuthi i-UAE ingumphakathi ophephile futhi ozinzile, ovulekile nthuthukayo, odume ngokubekezelelana, ubuntu nobubele.
Imizamo kahulumeni yokusiza umphakathi ezinqubweni zenguquko iye yaxhaswa yinqubomgomo, eyasungulwa e-2009, ukuthi izintshumayelo ezenziwa ngemihlangano yangoLwesihlanu kuwo wonke ama-mosque e-Federal kumele zigxile endimeni yenkolo neyokufundisa yenkolo hhayi nje emfundisweni yenkolo. Izihloko zifaka ukuthi uzikhulise kanjani izingane, amalungelo abesifazane kanye nokubaluleka kokusebenza, indawo yokuhlala yezwe nokubekezelelana.
Umgomo wokusebenza kwezenhlalo kahulumeni usebenze kahle, njengoba kufakazelwa isikhundla ku-UN Human Development Index (HDI), ebheka ngale kweGDP ekuchazeni kabanzi inhlala-kahle. Phakathi kwe-1980 ne-2007, i-UAE HDI inyuke ngamaphesenti ama-0.72 ngonyaka, futhi namuhla iyi-0.903, ikhuphuka isuka ku-0.743. Lokhu kubeka i-Federation amashumi amathathu nanhlanu emazweni e-182 lapho idatha itholakala khona - ukuthola indawo ye-UAE ohlwini lwamazwe anenqaku eliphezulu lokuthuthuka komuntu.
Noma kunjalo, ukwanda ngokushesha kwe-Federation kulethe izinselelo zabantu. Ekupheleni kwe-2009, inani labantu base-UAE lalinganiselwa ezigidini ezingama-50.6, lenyuka lisuka kwizigidi ze-4.76 ku-2008, noma isilinganiso sokukhula saminyaka yonke samaphesenti ayi-6.3; isilinganiso sokukhula kwesibalo sendawo silinganiselwa kumaphesenti angu-3.4 e-2009. Kodwa-ke, ngaphandle kwalokhu kwanda okusheshayo, i-UAE igcine isikhundla sayo njengenye yezizwe ezicebe kakhulu ngokwemali engenayo ye-GDP, eyayilinganiselwa eDh195,000 (US $ 53,133.5) ekuqaleni kwe-2009; kwesibili kuphela ku-Qatar ezweni lama-Arabhu.
Umndeni bekulokhu kuyitshe lomphakathi we-UAE. Namuhla, izingqinamba zezenhlalo kanye nezomnotho zingaphonsela inselelo ngisho nakubantu abazinikele kakhulu emalungwini omndeni, futhi uHulumeni uyabaxhasa labo abaswele, ikakhulukazi asebekhulile, abakhubazekile nabahlukanisile. Ngaphezu kwalokho, inqwaba yezinhlangano ezinikela zikahulumeni nezingezona ezikahulumeni zibandakanyeka ezinhlelweni zezenhlalakahle. I-UAE Red Crescent Authority, ePhakathi, iyinhlangano yenhlangano enkulu yokupha enikela kakhulu ezweni, enikeza ngezinhlelo ezibanzi zezenhlalo, ezomnotho, zezempilo nezemfundo. Usizo olusebenzayo lunikezwa nezikhungo zenhlalo eziqhutshwa yi-General Women Union.
Uhulumeni futhi ubeka phambili izidingo zamakhaya endawo futhi uhlose ukwakha imiphakathi enezindawo ezidingekayo. Cishe ama-villas amasha we-17,000 e-Emiratis azokwakhiwa e-Abu Dhabi eminyakeni emihlanu ezayo, kuthi i-50,000 kule minyaka engamashumi amabili ezayo. Iningi lezindlu nezakhiwo kuzonikezwa izakhamizi mahhala. Uhlelo lwezezindlu olwe-Shekh Zared, oluxhaswe nguHulumeni ukuhlinzeka ngemali yesibonelelo kanye nezimali mboleko ze-UAE Uphines, luyaqhubeka nokwandisa imisebenzi yalo kulo lonke i-Emirates.
I-UAE ihlonipha ubuqotho babo bonke abantu abahlala ku-Federation. Ukuzibophezela kwayo ekuqinisekiseni ukulingana kanye nobulungiswa bezenhlalo kuzo zonke izakhamizi kufakwe kuMthethosisekelo. UMthethosisekelo ubuye uveze inkululeko namalungelo azo zonke izakhamizi, ukunqabela ukuhlukunyezwa, ukuboshwa ngokungafanele, kanye nokuhlonishwa kwenkululeko yomphakathi, kubandakanya inkululeko yokukhuluma nabezindaba, enokuthula
umhlangano nososeshini, kanye nomkhuba wezinkolelo zenkolo. Uhulumeni uzibophezele ngokuqinile ukugqugquzela, ngendlela eyakhayo, imigomo Yesimemezelo Somhlaba Wonke Samalungelo Abantu futhi izimisele ngokuthuthukisa umlando wayo wasekhaya ngokuletha imithetho yayo kanye nezenzo zayo kuze kube yimanje. Lokhu kuhambelana negugu namasiko enkolo ye-UAE, okuqinisa ubulungisa, ngokulinganayo nokubekezelelana.
Ezingeni lamazwe omhlaba, i-Federation iyisiginali yesivumelwano se-Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Convention on the rights of the Child, International Labour Organisation Convention on Minimum Age, kanye nesivumelwano Samalungelo Abantu Abakhubazekile.
Ezingeni likazwelonke, i-Federation iyisiginesha ye-Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Convention on the rights of the Child, International Labour Organisation Convention of Minimum Age, kanye nesivumelwano Samalungelo Abantu Abakhubazekile.
Ezingeni likazwelonke, isu likahulumeni ligxila ekuqinisekiseni ukuthuthuka okuzinzile ezweni lonke kanye nezinhlelo zithuthukisa ukuthuthukiswa kwabesifazane kanye nokuthuthukiswa kwezinhlelo zemfundo ephakeme nezinhlelo zokunakekelwa kwempilo, kanye nokwenziwa kwamalungu omphakathi anezidingo ezikhethekile kanye namanye amaqembu angenabani inqubo yentuthuko.
Mayelana nezingqinamba zabasebenzi, i-UAE ihlose ukuphatha nokuphatha imvelo yokusebenza ngokuhambisana nemithetho yamazwe omhlaba kanye nezindlela ezihamba phambili zabasebenzi bamazwe omhlaba. Kwenziwe imizamo emikhulu yokuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi, ukuqinisekiswa kokukhokhwa kwemali ngesikhathi kanye nokwenza ngcono izimo zokuhlala kanye nokusebenza, kanye nokuqinisekisa ukuqiniswa okuqinile kwemithetho ukuze kuncishiswe ukwephulwa.
Ukulingana ngokobulili kube ku-ajenda kaHulumeni kusukela kwasungulwa i-Federation, futhi abesifazane e-UAE sekuyisikhathi eside babonwa njengabalingani abalinganayo ukuthuthuka kwezwe. UHulumeni uyaqhubeka nokulandela isu lokunika amandla abesifazane emkhakheni wezamasiko, wezenhlalo nezomnotho. Njengomphumela, i-UAE ibekwa endaweni yamashumi amathathu nesishiyagalombili ku-2009 UN Human Development Report Gender-Development Development Index - umdwebo owubeka phakathi kwamazwe abekwe ezikhundleni eziphezulu.
Abesifazane base-UAE namuhla babamba iqhaza kuzo zonke izikhungo zikahulumeni, kubandakanya izikhulu eziphezulu, ezomthetho kanye nezobulungiswa, futhi bathokozela imisebenzi ehlukahlukene. Eqinisweni, abesifazane base-UAE manje bakha amaphesenti ama-66 abasebenzi abasebenza emkhakheni kahulumeni, abangamaphesenti ama-30 amaphesenti abo asezikhundleni eziphezulu.
Zonke izakhamizi ze-UAE zijabulela ukufinyelela mahhala emfundweni yamabanga aphansi, yasekondari nephakeme. Eminyakeni yamuva nje, imboni yezemfundo ithathe ukubaluleka okusha: ukuguqulwa kwayo kanye nokwenza ngcono kubonisa isinyathelo esibalulekile ezinhlosweni zokuthuthuka eziqhubekayo zeNhlangano, futhi kwenziwa imizamo emikhulu kulo lonke ibhodi ukuze kubuyekezwe ikharikhulamu futhi iqinisekise ukuthi izikole kanye namakolishi kuhlolwa kahle futhi igunyazwe.
Isifundo Esikhethekile sithola ukunakwa okusha, kugxilwe ku-2009 ekuhlanganiseni kwabafundi bakazwelonke abavela ezikhungweni zezidingo ezikhethekile ezahlukahlukene baba yizikole zomphakathi ezijwayelekile. Iqoqo elisha lezindinganiso zezikole zikahulumeni nezizimele lihlose ukuqinisekisa ukuthi izikole ziyayilandela le nqubomgomo, futhi izinhlawulo zizotholwa ngokungamukeli kwezingane ezinezidingo ezikhethekile.
Isigaba semfundo ephakeme e-UAE nayo iyakhula futhi ishintshe ngokushesha. Kwakhiwa ikhempu entsha yaseZared University eyakhiwe kumahektare e-75 esifundeni saseNhlokodolobha esivelayo. INyuvesi yase-UAE e-Al Ain nayo inezinhlelo zokwanda okuphakeme, kanti isikhungo esisha sakhiwa. Ezinye izikhungo ezibalulekile zesigaba sesithathu zibandakanya amaKholeji aphezulu obuchwepheshe, isikhungo sokuqeqesha i-Etihad, i-Emirates Avation College ye-Aerospace ne-Academic Studies, i-Emirates Institute for Banking and Finance, kanye namakolishi ka-Etisalat kanye neyunivesithi.
Amanyuvesi aphesheya, asuka eParis Sorbonne aye kwiMelika State University, amelwe kahle kakhulu e-UAE. I-Abu Dhabi campus yaseNew York University ivula ekwindla kwe2010. Ezinye izikhungo ezibalulekile ezihlinzeka ngezifundo ezinhlobonhlobo ezibandakanya i-INSEAD, iNew York Film Academy, iDubai School of Government, Petroleum Institute, kanye neMasdar Institute of Science and Technology.
Ukuhlinzekwa kwezempilo e-UAE kusemhlabeni jikelele, futhi ukunakekelwa kwangaphambi nangokwendalo kuyahambisana namazwe athuthuke kakhulu emhlabeni. Njengomphumela, isikhathi sokuphila lapho kuzalwa iminyaka ye-78.5 sifinyelele emazingeni afana nalawo aseYurophu naseNyakatho Melika.
Ukwethulwa komshuwalense wezempilo ophoqelekile e-Abu Dhabi yabathengisi kanye nabancike kubo kuyishayeli elikhulu ekuguqulweni kwenqubomgomo yokunakekelwa kwempilo. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokuhlanganisa luhlose ukuqinisekisa ukuthi wonke ama-Emirati nabafuduki ezweni bayohlanganiswa ngumshuwalense wezempilo ophoqelelwe ngaphansi kohlelo olubumbene.
Izikhungo zokunakekelwa kwempilo sezivele zisezingeni eliphakeme e-UAE, futhi, ngaphandle kwesimo sezulu sezezimali, ukunakekelwa kwezempilo kuhlala kugxilwe ekutshalweni kwezimali, ngenqwaba yamaphrojekthi kahulumeni nawangasese enziwa e2009.
Umuthi wokuzivikela kanye nempilo yomphakathi ubhekwa njengebalulekile enhlalakahleni yesikhathi eside sabantu abancane abase-UAE. Ochwepheshe ukwanda kwezifo eziningi zendlela yokuphila eminyakeni ezayo. Yize izithiyo zamasiko zivulwa kancane, kodwa zisathinta izindaba ezinkulu ezinjengomdlavuza. Ukuphoqelelwa kwama-mammogram kwabesifazane abaneminyaka ephakathi kwamashumi amane namashumi ayisithupha kanye nokuvinjwa kokubhema kukahulumeni ezindaweni zomphakathi kuyizibonelo zemizamo eyenziwayo yokwandisa impilo yomphakathi kulokhu. I-UAE futhi inamanani amaningi esifo sikashukela nesifo senhliziyo, futhi ikhipha amasu okubhekana nalezi zingqinamba. Ukunakekelwa kwezempilo okuyisisekelo kungenye ithuluzi elibalulekile enqubomgomo yezempilo yomphakathi, futhi ukwenza i-UAE isebenze kanzima ukuthuthuka.
Iziphathimandla zezempilo yomphakathi e2009 zaphonswa inselelo ngokusatshiswa komqedazwe wesifo sengulube (H1N1). Kodwa-ke, izinhlaka ezintathu ezinkulu zezempilo - uMnyango Wezempilo, Isikhungo Sezempilo - i-Abu Dhabi kanye neDubai Health Authority - bashintshe ngokushesha nangokucophelela ekwelashweni kwezokwelapha, ukuphathwa kwezinhlekelele nokulawulwa kwezifo kanye nohlelo olusetshenziswayo lokulawula isimo .
I-UAE inezinsizakalo zezempilo ezibanzi, ezixhaswa nguhulumeni kanye nomkhakha wezempilo ozimele osathuthuka onikezela ngezinga eliphakeme lokunakekelwa kwempilo kubantu. Ezingxenyeni eziningi ze-UAE, ukulethwa kokunakekelwa kwempilo kwenziwa ushintsho olukhulu.
Izifo eziningi ezithathelanayo ezinjengomalaleveva, isimungumungwane ne-poliomyelitis ezake zaba yimbangela e-UAE seziqediwe, kanti ukunakekelwa kwangaphambi kokuzalwa kanye nokwasemuva kokubeletha kuyahambisana namazwe athuthukile kakhulu emhlabeni: inani lokuzalwa kosanda kuzalwa (neonate) sehlisiwe saba yi-5.54 nge-1000 nokufa kwezinsana ku-7.7 nge-1000. Izinga lokushona kwabesifazane sehle laya ku-0.01 ngayo yonke i-100,000.
Njengomphumela waleli zinga eliphakeme lokunakekelwa kuzo zonke izigaba zohlelo lokunakekelwa kwezempilo, isikhathi sokuphila lapho uzalwa e-UAE, eminyakeni ye-78.3, sesifinyelele emazingeni afanayo nalawo aseYurophu naseNyakatho Melika. Kuze kube manje, ukunakekelwa kwezempilo e-UAE, sekuxhaswe uHulumeni. Njengakweminye imikhakha, lokhu kugcizelelwa kuyavela futhi ukusebenzisana komphakathi nabazimele sekubaluleke kakhulu.
Umgomo womphakathi ugxile ekuthuthukiseni izinhlaka zenhlangano kanye nezomthetho ezisuselwa ekusetshenzisweni okuhle kakhulu, ukuthuthukisa amakhono ezempilo azimele kanye nawomphakathi. Ngaphezu kwalokho, isenzo senqubomgomo yomphakathi sizobeka izinto eziza kuqala ekuthuthukisweni kwemisebenzi yezempilo ngaphakathi komkhakha.
Inguquko Yezokunakekelwa Kwezempilo e-Abu Dhabi
Ukulethwa kwezidingo zezempilo e-Abu Dhabi kwenzeka engxenyeni enkulu ezothinta bonke ababambiqhaza: iziguli (izakhamizi nabahambi), abahlinzeki kanye nalabo ababhekele ukuhlela, okuqinisekisa ikhwalithi yezinsizakalo kanye nokuxhasa ngezimali uhlelo lwezempilo. Izinhloso ezibalulekile zeSiphathimandla Sezempilo e-Abu Dhabi yilezi:
Thuthukisa ikhwalithi yokunakekelwa, okucatshangwa ngayo ngokuyinhloko, ukuthi kugqugquzelwe ukusetshenziswa kwamazinga wezinsizakalo ezinzima nokuhlosiwe kokusebenza kwabo bonke.
Nweba ukufinyeleleka kwezinsizakalo, kunikeze bonke abahlali ukufinyelela kulelo zinga linye lokunakekelwa namandla okukhetha izinsiza zokunakekelwa kwempilo ngaleyo ndlela bekhuthaza ubuhle ngokuncintisana kwemakethe yamahhala.
Shintsha ukusuka emphakathini uye kubahlinzeki abazimele ngokuphepha nangokucophelela ukuze abahlinzeki abazimele, hhayi uhulumeni, izidingo zokunakekelwa kwempilo, ngeqhaza likahulumeni elinqunyelwe ekuthuthukiseni nasekuqiniseni amazinga amasha anempilo ezempilo asezingeni lomhlaba.
Sebenzisa imodeli entsha yezimali ngohlelo olusha lomshuwalense wezempilo.
Umshuwalense ophoqelekile wabo bonke abasebenzi, kubandakanya nabasekhaya, uxhaswa ngabaxhasi. Uhlelo oluphoqelekile lomshuwalense wezempilo wabasebenzi bezinkampani ezizimele, njengoba lusetshenzisiwe e-Abu Dhabi, luzosebenza ezweni lonke e2008. Ukuphawulwa kwalolu hlelo olusha kufaka phakathi inqubo yokubuyiselwa kwemali ngokusobala nangokusobala, ukufinyelela okungabizi kubo bonke abahlali kanye nemali ethembekile yokunakekelwa kwempilo ese-Abu Dhabi.
Isikhwama senhliziyo sizoqhubeka nokusebenzela abakhipha imali ezweni elingaphansi futhi sibuye sibhekelele nezimo zempilo ezibucayi ezifana nomdlavuza, ukuvuvukala, ukukhubazeka kanye nokukhubazeka.
Kuhlelwa nohlelo lomshuwalense wezempilo obumbene eDubai wezizwe nakwamanye amazwe futhi kulindeleke ukuthi uhlelo luzobe seludluliselwa ezweni lonke.
I-United Arab Emirates ingenye yezindawo ezikhula ngokushesha emhlabeni izivakashi nezindawo zamabhizinisi. Ukungenisa izihambi kwendabuko yama-Arabhu kanye namazinga okushisa ebusika anethezekile ahambisana nengqalasizinda eyindida nezinsizakalo ezisezingeni lomhlaba.
I-UAE iphinde yaphenduka indawo esezingeni lomhlaba yezingqungquthela, imibukiso yesifunda neyamazwe omhlaba kanye nemicimbi emikhulu yezemidlalo emhlabeni jikelele efana neDubai World Cup yokugibela amahhashi, i-Abu Dhabi Formula One Grand Prix, iDubai Desert Classic Golf Championship, iFIFA INdebe Yomhlaba wonke yeklabhu, imikhosi yamafilimu esezingeni lomhlaba eDubai kanye nase-Abu Dhabi, nangokuhlangana ne-White House, ingqungquthela ye-Global Enterprise. I-UAE iphumelele ibhidi yokusingathwa kwe-2020 World Expo.
Umenzeli omkhulu wokuhamba we-inthanethi wase-United Kingdom, i-expedia.co.uk, ukhethe u-Abu Dhabi njengenye yezindawo ezihamba phambili zomhlaba zokuhamba nge-10 e-2008. Isikhumulo sezindiza i-Dubai International sathola umklomelo wesikhumulo sezindiza esihamba phambili saseMiddle East kuma-2012 World Travel Awards.
Kuningi okufanele kwenziwe e-UAE ngale kweDubai ne-Abu Dhabi. Okokuqala ukuhlaliswa ngenkathi ye-Bronze Age, iSharjah iyinhloko-dolobha yamasiko emirates. Indawo yamaGugu eSharjah City ifaka iMarimeime Museum, iMnyuziyamu yamaSulumane kanye neminyuziyamu yobuciko bendabuko kanye nasesikhathini se-Arabhu, phakathi kwabanye abaningi.
U-Ajman uheha izivakashi zomhlaba wonke ngamabhishi amahle, njengoba kwenza neFujairah enikezela futhi ukudonsela amanzi emanzini nokuya ezindaweni ezivakashile eNhlonhlweni yaseMusandam, edume ngokungaxutshwe nalutho lwayo lwamachibi, amalahle anamatshe nezixhobo zamakhorali.
IRas Al Khaima, esemngceleni ne-Oman, cishe waziwa kakhulu phakathi kwabahambi bendawo abahamba ngezintaba ezimibalabala zeHajjar.
I-Visa / Passport Yokuhambela e-UAE
1) Imininingwane kawonkewonke
Zonke AmaNdiya nge Indian amaphasiphothi avumelekile izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha angangena kwi-UAE.
I-2) I-Visa kumaPhoyinti kanye NamaPasipoti Asemthethweni
Amanxusa akhipha ama-visa kumaDiplomatic kanye namaPassports asemthethweni kuphela. Imibhalo edingekayo yalokhu yile:
I-Verbale evela eMnyangweni Wezangaphandle WaseNdiya (uma kwenzeka Izikhulu Zikahulumeni WaseNdiya) noma i-Diplomatic Mission ethintekayo (uma kwenzeka amaDiplomat noma Izikhulu ezisebenza kwi-diplomatic Mission) .Ukulethwa kokulethwa kwe-Ver verbale kufanele kube phakathi kwenyanga eyodwa usuku lokukhishwa kwayo.
Ifomu lesicelo elifayelwe ku-Capital Letters
Akuphelele show Ifomu lesicelo ngeke livunyelwe.
Ifomu lesicelo se-Visa kufanele lisayinwe ngumenzi wesicelo endaweni eyabelwe ukusayina kwakhe.
Imininingwane ye-Sponsor e-UAE iyimfuneko edingekayo.
IGovt. Iziphathimandla kufanele zisho imininingwane ye-Sponsor njengeNxusa labo noma I-Consadors e-UAE, ngenhloso Yokungena Nekheli Egcwele.
Ikhophi lePassport Passport (Ikhasi Lamagama, Idatha Yakho Nosuku Lokuphelelwa Isikhathi) ne-Coverpage (umbala).
Isithombe esisodwa esinemibala yepasipoti (Ukuze unamathiselwe).
I-3) I-Visa yabavakashi yokuhambela e-UAE
Amanxusa e-UAE awakhiphi ama-visa kumapasipoti ajwayelekile.
I-visa yezivakashi ye-Indian National, ephethe ipasipoti ejwayelekile, ihlelwe ngumxhasi e-UAE. Ingatholakala futhi ekubhukeni ihotela e-UAE noma nge-Emirates Airlines Office noma iHhovisi le-Air Arabia noma nge-Agent Yezokuvakasha eNdiya.
I-4) Ukukhanselwa kwe-Visa
Inxusa lase-UAE alikhanseli ama-visa.
Ukuze ivalwe i-visa yakho, udinga ukuxhumana nomxhasi wakho e-UAE obekuhlelele i-visa. Umxhasi wakho unegunya lokukhansela i-visa yakho yangaphambilini. Ngaphandle kokuthola ukuthi i-visa yangaphambilini ikhanseliwe, awukwazi ukuthola i-visa entsha ye-UAE futhi awukwazi ukuya e-UAE.
Inqubo yokulahleka kwePasipoti, equkethe i-visa evumelekile ye-UAE.
Uma kwenzeka kulahleka ipasipoti yaseNdiya equkethe i-visa evumelekile ye-UAE, la madokhumenti alandelayo adinga ukuthunyelwa e-Embassy Counter:
Ukulahleka okugcwele kwamafomu ePasipoti (kuTyped Capital Letters), nezinombolo ezimbili zokuxhumana zalowo ofaka isicelo (ezansi nefomu).
Ikhophi yombala yepasipoti yakudala nelisha.
Ikhophi enemibala ye-UAE Residence Visa.
Incwadi evela kumxhasi ku-UAE, ethi umfakisicelo ushiye i-UAE ngemvume yakhe.
Ikhophi yombiko wamaphoyisa oqobo noma i-FIR ngesiNgisi, efakazelwa wumnyango wezangaphandle wezindaba waseNdiya (Usuku lokukhishwa kwe-FIR kufanele lube ngaphambi kosuku lokukhishwa kwepasipoti entsha).
UKUCHWEPHESHELA kwe-ARABIC kombiko wamaphoyisa wephasiphu elahlekile obekwe uphawu lomhumushi wesi-Arabhu.
Isithombe esisodwa sePassport size Colored Colour.
Imali ekhokhelwa i-Dh 300 / -.
Lapho le mibhalo isingenisiwe e-UAE Embassy Counter, umfakisicelo uzokwaziswa lapho imvume yokungena isilungile.
Isimangalo / Ukubhaliswa Kwemibhalo ngokusemthethweni
I-1) Isimangalo / Ukushicilelwa Kwemibhalo Emthethweni
Abantu bangathumela amadokhumenti abo e-OWN, noma amadokhumenti WOKUGCINA BLOOD babo, ekuboniseni ubufakazi boMazisi kanye nobufakazi be-Relation. Imibhalo yabangani ingahanjiswa KUPHELA ngokusebenzisa noma yimaphi ama-ejenti agunyaziwe.
Imibhalo Yokuhweba ingahanjiswa ngqo yiNkampani egunyaziwe - Abasebenzi. Incwadi yesiphathimandla kwiNkampani Letterhead (enegama loMqashwa kanye nesiqu seNkampani) kanye ne-ID yenkampani kuyadingeka kuleli cala.
I-2) Izinyathelo Zokuthathwa Kwemibhalo / Okwesemthethweni
Yonke imibhalo idinga ukufakazelwa kuqala yiNgxenye Yabasebenzi Yomnyango Wezangaphandle Wezwe laseNdiya, bese kulandela isigaba se-Consular Section, iVasant Kunj, eNew Delhi. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi amadokhumenti ezemfundo adinga ukufakazelwa nguMnyango Wezemfundo wombuso othintekayo ngaphambi kofakazi 'beZangaphandle'. Ngokufakazelwa kwengqondo eComments Section, i-UAE Dirham 156.06 yimali ekhokhiswayo idokhumenti ngayinye futhi isikhathi siyi-9: I-00 AM kuya ku-2: I-00 PM, ngoMsombuluko kuze kube uLwesine, kanye ne-9: 00 AM to 12: 00 PM ngoLwesihlanu. Lo mbhalo ungatholwa ngosuku olufanayo, phakathi kwe-3: 00 ne-4: I-00 PM, ngoMsombuluko kuze kube uLwesine, kanye ne-2: I-30 PM iye e-3: 30 PM ngolwesihlanu. Ngemibuzo, sicela usithumele ie-mail kithi ku: consular@uaeembassy-newdelhi.com
Ezinye izitifiketi ezinjengomshado, ukuzalwa, okuhlangenwe nakho, ama-afidavithi, ama-moto ama-passports alahlekile, imibhalo yezentengiso, njll. Zidinga ukufakazelwa nguMnyango Wezangaphandle Wezangaphandle waseNdiya kuphela. Yonke inqubo ihlala ifana. Imali yamadokhumenti athengiswayo incike endabeni futhi imali ye-invoice iyahluka ngenani le-Invoice. Uyacelwa ukuthi uthintane ne-Consum Section ya-AUE uma kunemibuzo.
I-3) Izimali Zokutholwa Kwemibhalo
Imali ekhokhwayo e-UAE Dirham
Idokhumenti Yezemfundo (amadiploma, amadigri, izitifiketi zesikole)
Isitifiketi Sikazwelonke Sokuhweba
Amadigri nezitifiketi zeMadrasa
Amandla Wommeli (Okomuntu siqu)
Isitifiketi sokuhlaziywa kwezidakamizwa
Isitifiketi Sokubhalisa Somhlengikazi
Isitifiketi Somlingisi Wamaphoyisa
Ikhophi Layisense Lokushayela, Amaphasiphothi, njll.
Imali ekhokhwayo yamanani ama-invoice ne-Invoice Value
I-4) Imibhalo Yezentengiso
I-Factorization phakathi kwabantu, ngenkathi kuvulwa inkampani
I-Factorization ngokuthatha umkhiqizo, lapho ithengiswa ngaphakathi
I-Factorization ngokuthatha umkhiqizo, lapho ithengiswa ngaphandle
Amandla wommeli ukuvula ibhizinisi ngaphakathi kombuso.
Ukuguqulwa kwemali eyabelwe.
Isingeniso somlingani omusha.
Franchise - ukusungula inkampani
Vula igatsha elisha lenkampani yakwamanye amazwe esifundazweni.
Vula imikhiqizo entsha yenkampani yakwamanye amazwe engaphandle kwe
Ilayisense Yebhizinisi (lapho amakhophi asatshalaliswa emazweni angaphezu kwelilodwa ukuvula igatsha kuyo yonke imibuso).
Ukufezeka kwamaphrojekthi esele
kuqediwe lapho kuphothulwe iyunithi ngayinye,
ngaphakathi ezweni noma ngaphandle kwezwe.
Isabelomali sezimali senkampani
Isabelomali sezimali ezihlanganisiwe sonyaka ngamunye wezimali
Ukubhaliswa Kweelayisense Yabavakashi
Izinhlangano Zentengiso (Ezizimele / Zomphakathi)
Ukukhishwa Kwamalayisense, Ukuqokwa Kwegatsha Umphathi,
Ukuvula i-Brnach, ukuphathwa kwe-Quotas
Cert. Ubulungu Bama-Chambers of Commerce.
Amaminithi Omhlangano Womhlangano Wabaqondisi.
Imemorandamu yeNhlangano Yezinkampani.
Ikhophi yanoma yiziphi izinhlaka eziqinisekiswe ngaphambili ezibalwe ngenhla.
Imali iyashintsha nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini
I-5) Imali ye-invoice
I-1) Ukutholwa kwe-Fingerprints kufakazelwe yi-UAE Consulate
Ukuze athole isitifiketi sokuvunyelwa kwamaphoyisa kunoma yimuphi u-Emirate we-UAE, umuntu ozongenela ukhetho kumele afake iminwe yakhe embhalweni obhalwe ngoyinki omnyama esiteshini samaphoyisa sasedolobheni lakubo, bese kuba nguMnyango Wezasekhaya wombuso wakhe bese siholwa nguMnyango Wezangaphandle. Izindaba zeNdiya. Ikheli lehhovisi labo iDelhi liyisigaba se-Consular, iPatiala House, iTilak Marg, eduze kwe-India Gate. Amanye amahhovisi oMnyango Wezangaphandle atholakala eChennai, Guwahati, Hyderabad naseKolkata. Umuntu ozoqokwa angenza futhi ngqo kwi-Fingerprint Cell e-Patiala House ukuze enze iminwe yakhe. Izicucu zeminwe ezihlaselwe lapho-ke kufanele zilethwe kwiNxusa lase-UAE (kungaba yodwa, noma ngezihlobo zakhe zegazi, noma ngomunye wabahlinzeki bethu abagunyaziwe) ukusuka ku-9: 00 am to 12: 00 pm, Monday to Friday. I-Rs.3,750 / - yimali ekhokhelwa isitifiketi ngasinye ku-CASH, futhi umqulu uzobuyiselwa ngosuku olufanayo, phakathi kwe-3: 00 pm and 4: 00 pm.
I-2) Kuthunyelwa Iminwe Eminwe ku-UAE
Lapho usuthole izingxivizo zeminwe ezifakazelwe ku-Agent, kufanele uzithumele kwinhlangano efanelekile e-UAE. Sicela ufake izinto ezilandelayo.
Ifomu leminwe ligunyazwe ngokusemthethweni yi-UAE Consulate
Ikhophi yemvume yakho yangaphambilini yokuhlala e-UAE
Ikhophi yephasiphothi yakho yakamuva
Izithombe ezinobukhulu obungamaphasiphothi
Noma yiziphi izimali ezidingekayo (kuya ngomthetho)
Thumela iphakethe lakho kuMnyango othintekayo wama-Interior ejensi ngezansi. Ngaphambi kokuthumela leyo mibhalo, sicela ushayele iHhovisi le-UAE ukuthola imininingwane ngezimali ezidingekayo, futhi uqiniseke ukuthi ubathumela esifundeni esifanele.
UMnyango Jikelele Wophenyo Lobugebengu
Izimvume Nesitifiketi Sesigaba
Amaphoyisa ase-Dubai I-General HQ
Ucingo: 971-4-2013484 / 2013564
UMnyango Wamaphoyisa - Abu Dhabi
Siphakamisa ukuthumela amadokhumenti kumngane e-UAE, ukuze umngani wakho akwazi ukuthola isitifiketi eMnyangweni Wamaphoyisa esikhundleni sakho. Lokhu kuzonciphisa kakhulu isikhathi sokusebenza uma kuqhathaniswa nokuthumela imibhalo ngqo eMnyangweni Wamaphoyisa.
Uhlu Lokuthola Imithi Ekhawulelwe ku-UAE
Ngezansi uhlu lweMithi elawulwa kanye neMithi elawulwayo, ebhalisiwe noMnyango Wezempilo e-UAE nokugcizelelwa yi-UAE Ministry of Interior and International Narcotic Controlled Board (INCB).
Eminye imibuzo ingaqondiswa eMnyangweni Wezokulawulwa Kwezidakamizwa e-UAE e-Abu Dhabi, e-PO Box 848, ngefeksi: + 971 2 6313 742.
Uhlu olulandelayo libonisa inombolo ye-serial, igama lokuhweba, igama elijwayelekile kanye nendlela yokwelapha.
I-1, Ithebula le-CNXX le-123 COLD, i-Codeine phosphate 8mg, i-Acetaminophen 325mg, iCafeine 30mg, iCarbinoxamine maleate 3.06mg, i-Phenylephrine 5mg
I-2, i-ABILIFY 10mg, i-Aripiprazole 10mg, amaphilisi
I-3, i-ABILIFY 15mg, i-Aripiprazole 15mg, amaphilisi
I-4, i-ABILIFY 20mg, i-Aripiprazole 20mg, amaphilisi
I-5, i-ABILIFY 30mg, i-Aripiprazole 30mg, amaphilisi
I-6, YENZIWE i-linctus eyakhiwe, i-Codeine Phosphate10mg, i-Triprolidine1.25mg, i-Pseudoephedrine 30mg / 5ml, i-Linctus
I-7, DM ETSHISIWE, i-Dextromethorphan 10mg, i-Triprolidine1.25mg, i-Pseudoephedrine 30mg / 5ml, i-Linctus
I-8, ACTIVELLE, Estradiol neNorethisterone, Amatafula
I-9, i-ADOL ebandayo, i-Dextromethorphan HBr 15mg, i-Pseudoephedrine HCL 30mg, iParacetamol 325mg, iCaplets
I-11, i-ADOL, i-Codeine phosphate 10mg, iParacetamol 150mg, iCafeine 50mg, iSalicylamide 200mg, i-Tablets
I-12, AKINETON 2mg, iBiperiden HCL 2mg, amaphilisi
I-13, AKINETON 5mg, iBiperiden Lactate 5mg / ml, injekishini
I-14, i-AKINETON RETARD 4mg, iBiperiden HCL 4mg, amaphilisi
I-15, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Amathebhulethi
I-16, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg / 2ml, Injection
I-20, ANDRIOL 40mg, iTestosterone undecanoate 40mg, Amakhandlela
I-21, ANEXATE 0.5mg / 5ml, Flumazenil 0.1mg / ml, injekishini
I-22, ANEXATE 1mg / 10ml, Flumazenil 0.1mg / ml, injekishini
I-23, I-ARTANE 2, i-Benzhexol HCL 2 mg, Amathebulethi
I-24, I-ARTANE 5, i-Benzhexol HCL 5mg, Amathebulethi
I-25, i-ARTHROTEC 50, iMisoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, amaphilisi
I-26, i-ATIVAN 1, i-Lorazepam 1mg, Amathebulethi
I-28, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Amathebulethi
I-29, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Amathebulethi
I-30, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Amathebulethi
I-31, BARNETIL 200mg / 2ml, Sultopride 200mg / 2ml, Injection
I-32, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Amathebulethi
I-33, BENZTRONE 5mg / ml, Oestradiol Benzoate 5mg / ml, injekishini
I-34, BEPRO, i-Papaverine HCL 12.5mg, iCodeine Sulphate 125mg, iCalcium Iodide 1gm, Glycerine 5gm / 100ml, Syrup
I-35, i-BRONCHOLAR, i-Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg, i-Ephedrine HCl 7.5mg, iChlorpheniramine isibeletho i-1.25mg / 5ml, Inhlanganisela
I-36, i-forte ye-BRONCHOLAR, iDextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg, Guaifenesin 50mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg / 5ml
I-37, i-BRONCHOPHANE, i-Dextromethorphan HBr 125mg iDephenydramine HCl 100mg, Ephedrine HCl 150mg, Guaifenesin 1gm / 100ml, Syrup
I-38, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, amaphilisi
I-39, I-BUSPAR 10, iBuspirone HCL 10mg, Amathebulethi
I-40, I-BUSPAR 30 mg, iBuspirone HCl 30 mg, I-Domeose Yethebhulethi
I-41, I-BUSPAR 5, iBuspirone HCL 5 mg, Amathebulethi
I-42, i-CAMCOLITE 250, iLithium Carbonate 250mg, amaphilisi
I-43, i-CAMCOLITE 400, iLithium Carbonate 400mg, amaphilisi
I-44, i-CANTOR 50, iMinaprine 50mg, iThebhulethi
I-45, CELLCEPT 250mg, Mycophenolate mofetil 250mg, Amakhandlela
I-46, CELLCEPT 500mg, Mycophenolate mofetil 500mg, Amakhandlela
I-47, CIPRALEX 10mg, i-Escitalopram (njengoba i-Escitlopram oxalate) 10mg / ithebhulethi, amaphilisi
I-49, CIPRALEX 15mg, i-Escitalopram (njengoba i-Escitlopram oxalate) 15mg / ithebhulethi, amaphilisi
I-51, CIPRALEX 20mg, i-Escitalopram (njengoba i-Escitlopram oxalate) 20mg / ithebhulethi, amaphilisi
I-53, CIPRALEX 5mg, i-Escitalopram (njengoba i-Escitlopram oxalate) 5mg / ithebhulethi, amaphilisi
I-54, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Amathebulethi
I-55, CLIMEN, i-Micronised Estradiol Valerate (epinki) 2mg / 1tab, Micronised Estradiol Valerate (mhlophe) 2mg / 1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg / 1.
I-56, ICOPOPOLOL 2, iZuclopenhtixol diHCL 2mg, amaphilisi
I-57, ICOPOPOLOL 25, iZuclopenhtixol diHCL 25mg, amaphilisi
I-59, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol decanoate 200mg / ml, injekishini
I-60, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg / ml, injekishini
I-61, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Amathebulethi
I-62, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg / ml, injekishini
I-63, CODAPHED, iCodeine phosphate 8mg Chlorpheniramine maleate 2mg, Ephedrine HCL 15mg / 10ml, Syrup
I-64, i-Codaphed Plus, i-Chlorpheniramine Maleate Ephedrine HCl, iCodeine Phosphate, i-Ammonium Chloride, iSyrup
I-65, CODILAR, Dextromethorphan HBr100mg Phenylephrine HCL 40mg, Chlorpheniramine maleate 20mg / 100ml, Syrup
I-66, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Amakhandlela
I-68, CODIPRONT Cum exp., Codeine 200mg, Guaiphenesine 1gm, Phenyltoloxamine 66mg, Thyme ext. I-1gm / 100gm, iSyrup
I-69, CODIPRONT Cum exp., Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Guaifenesin 100mg, Amathebhulethi
I-70, i-CODIS, i-Aspirin 500 mg, i-Codeine Phosphate 8 mg, amaphilisi
I-72, i-CYTOTEC, iMisoprostol 200mcg, amaphilisi
I-73, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Amathebhulethi
I-74, DECA DURABOLIN 25mg / ml, Nandrolone Decanoate 25mg / ml, injekishini
I-75, DECA DURABOLIN 50mg / ml, Nandrolone Decanoate 50mg / ml, injekishini
I-76, DEHYDROBENZ-PERIDOL, iDroperidol 2.5mg / ml, injekishini
I-77, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Amathebulethi
I-78, DEXTROKUF, Dextromethorphan HBr 15mg / 5ml, Syrup
I-79, DEXTROLAG, iDextromethorphan HBr 10mg, iGuaifenesin 100mg, iChlorpheniramine isibeletho i-2mg, i-Amonium chloride 25mg / 5ml, Syrup
I-80, i-DHC CONTINUS, i-Dihydrocodeine tartrate 60mg, amaphilisi
I-81, i-DIALAG i-microclysma, i-Diazepam 5mg / 2.5ml, isixazululo se-Rectal
I-82, i-DIALAG i-microclysma, i-Diazepam 10mg / 2.5ml, isixazululo se-Rectal
I-83, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Amathebulethi
I-84, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Amathebulethi
I-85, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Amathebulethi
I-86, DIARSED, iDiphenoxylate HCL 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Amathebhulethi
I-87, i-DIAXINE, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, i-Atropine sulphate 0.025mg, amaphilisi
I-88, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Amathebulethi
I-89, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Amathebulethi
I-90, DICTON ibuyise i-30, i-Codeine 11mg, iCarbinoxamine 1.5mg / 5ml, Syrup
I-91, I-DIPRIVAN 1% w / v, I-Propofol 1.00% w / v, IVni infusion
I-93, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Ithebhulethi
I-94, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg / 2ml, In injion
I-95, DOGMATIL 25mg / 5ml, Sulpiride 25mg / 5ml, Isixazululo
I-96, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 mg, Amakhandlela
I-97, i-DOGMATIL Forte, i-Sulpiride 200 mg, Amathebulethi
I-98, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Amathebulethi
I-100, DORMICUM 5mg / ml, Mid Midolol 5mg / ml, injekishini
I-101, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Amathebulethi
I-102, DorsILON, Mephenoxalone 200mg, Paracetamol 450mg, Ithebhulethi
I-103, i-EDRONAX 4mg, i-Reboxetine 4mg, amaphilisi
I-104, i-EFEXOR 37.5, iVenlafaxine 37.5mg, amaphilisi
I-105, i-EFEXOR 75, iVenlafaxine 75mg, amaphilisi
I-106, i-EFEXOR XR 150, i-Venlafaxine Hydrochloride 150mg, Amakhandlela
I-107, i-EFEXOR XR 75, i-Venlafaxine Hydrochloride 75mg, Amakhandlela
I-108, i-ESTRACOMB TTS, i-Oestradiol 4mg, iNorethisterone acetate 30mg (Patch 1) + Oestradiol 10mg (Patch 2), Patches
I-109, i-ESTRADERM TTS 100, i-Estradiol 8mg / 20cm2, Amachashazi
I-110, i-ESTRADERM TTS 25, i-Estradiol 2mg / 5cm2, Amachashazi
I-111, i-ESTRADERM TTS 50, i-Estradiol 4mg / 10cm2, Amachashazi
I-112, i-ESTROFEM, i-Oestradiol 2mg, amaphilisi
I-113, I-ESTROFEMTETE, i-Oestradiol 4mg, i-Tablets
I-114, i-FAVERIN 100, i-Fluvoxamine maleate 100mg, amaphilisi
I-115, i-FAVERIN 50, i-Fluvoxamine maleate 50mg, amaphilisi
I-116, i-FEMOSTON 2 / 10, i-Dydrogesterone (Y) 10mg, i-Estradiol (O) 2.0mg, i-Estradiol (Y) 2.0mg, i-Tablets
I-117, i-FLEXIBAN, i-cyclobenzaprine HCL 10mg / ithebhulethi, amaphilisi
I-118, I-FLUANXOL 0.25, i-Flupenthixol 0.25mg, amaphilisi
I-119, I-FLUANXOL 0.5, i-Flupenthixol 0.5mg, amaphilisi
I-120, I-FLUANXOL 1, i-Flupenthixol 1mg, amaphilisi
I-121, I-FLUANXOL 3, i-Flupenthixol 3mg, amaphilisi
I-122, i-FLUANXOL Depot, i-Flupenthixol 20mg / ml, injekishini
I-123, i-FLUANXOL Depot, i-Flupentixol decanoate 100mg / ml, injekishini
I-124, I-FLUOXONE DIVULE, I-Fluoxetine 22.4mg, Amakhandlela
I-125, FLUNEURIN 20mg, Fluoxetin 20mg / 1capsule, Amakhandlela
I-126, I-FLUTIN 20mg, i-Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Amakhandlela
I-127, i-FLUXETYL 20mg, i-Fluoxetine (njengoba no-F. Hydrochloride) 20mg / kapotule, Amakhandlela
I-128, i-FRISIUM 10, i-Clobazam 10 mg, Amathebulethi
I-129, i-FRISIUM 20, i-Clobazam 20 mg, Amathebulethi
I-130, IGODINAL SODIUM, iPhenobarbitone sodium 200mg / ml, injekishini
I-131, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU / 1Cartridge, Powder for In injion
I-132, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU / 1Cartridge, Powder for In injion
I-133, i-HALDOL 0.5, iHaloperidol 0.5mg, Amathebulethi
I-134, HALDOL 2mg / ml, iHaloperidol 2mg / ml, Amaconsi
I-135, i-HALDOL 5, iHaloperidol 5mg, Amathebulethi
I-136, HALDOL 5mg / ml, iHaloperidol 5mg / ml, injekishini
I-137, i-HALDOL Decanoas, iHaloperidol 50mg / ml, injekishini
I-138, i-HALDOL Decanoas, iHaloperidol 100mg / ml, injekishini
I-139, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol (812) 125mg, Amakhandlela
I-140, IMUKIN 100mcg / 0.5ml, I-Recombinant Human Interferon-gamma 6000000 IU / ml, injekiseni *
I-141, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Amathebulethi
I-142, INTARD, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Amathebhulethi
I-143, INTRAVAL, i-Thiopentone Sodium 0.5g / 1vial, In injion
I-144, IXEL 25mg, Milnacipran 25mg / capule, Amakhandlela
I-145, IXEL 50mg, Milnacipran 505mg / capule, Amakhandlela
I-147, KEMADRIN 10mg / 2ml, Procyclidine HCL 10mg / 2ml, Injection
I-148, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, amaphilisi
I-149, i-KETALAR 10, iKetamine HCL 10mg / ml, injekishini
I-150, i-KETALAR 50, iKetamine HCL 50mg / ml, injekishini
I-151, KLIOGEST, Oestradiol 2mg, Norethisterone 1mg, Ithebhulethi
I-152, i-LAGAFLEX, i-Carisoprodol 300 mg, iParacetamol 250mg, amaphilisi
I-154, i-LARGACTIL 10, i-Chlorpromazine HCL 10mg, amaphilisi
I-155, i-LARGACTIL 100, i-Chlorpromazine HCL 100mg, amaphilisi
I-156, i-LARGACTIL 25, i-Chlorpromazine HCL 25mg, amaphilisi
I-157, LARGACTIL 25mg / ml, Chlorpromazine HCL 25mg / ml, injekishini
I-158, i-LARGACTIL 50, i-Chlorpromazine HCL 50mg, amaphilisi
I-161, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Amathebulethi
I-162, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Amathebulethi
I-163, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Amathebulethi
I-164, i-LIMBITROL, i-Amitriptyline 12.5 mg, i-Chlordiazepoxide 5 mg, Amakhandlela
I-165, i-LIORESAL 10, i-Baclofen 10 mg, Amathebulethi
I-166, i-LIORESAL 25, i-Baclofen 25 mg, Amathebulethi
I-167, i-LOMOTIL, iDiphenoxylate HCl 2.5mg, i-Atropine sulphate 0.025mg, amaphilisi
I-168, i-LUDIOMIL 10, iMaprotiline HCL 10mg, amaphilisi
I-169, i-LUDIOMIL 25, iMaprotiline HCL 25mg, amaphilisi
I-170, i-LUDIOMIL 50, iMaprotiline HCL 50mg, amaphilisi
I-171, i-LUDIOMIL 75, iMaprotiline HCL 75mg, amaphilisi
I-173, I-MELLERIL 10, iTioridazine HCL 10mg, i-Tablets
I-174, I-MELLERIL 100, iTioridazine HCL 100mg, i-Tablets
I-175, I-MELLERIL 25, iTioridazine HCL 25mg, i-Tablets
I-176, I-MELLERIL 50, iTioridazine HCL 50mg, i-Tablets
I-178, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg, Paracetamol 450mg, Ithebhulethi
I-179, i-MYOGESIC, i-Orphenadrine 35mg, iParacetamol 450mg, amaphilisi
I-180, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 mg, Amakhandlela
I-181, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 mg, Amakhandlela
I-182, NOBRIUM 10, Medazepam 10mg, Amakhandlela
I-183, NOBRIUM 5, Medazepam 5mg, Amakhandlela
I-184, i-NOCTRAN 10, i-Clorazepate dipotassium 10mg, i-Acepromazine isibeletho i-1.016mg, i-Aceprometazine yesandla i-10.16mg, amaphilisi
I-185, i-NORACOD, i-Codeine 10mg, iParacetamol 500mg, amaphilisi
I-186, i-NORCURON 10mg, i-Vecuronium Bromide 10mg / ampoule, i-Powder yokujova
I-187, I-NORCURON 4mg, i-Vecuronium Bromide 4.0mg / ampoule, i-Powder yokujova
I-190, i-NORDITROPIN Ipeni isethi i-12, i-Somatropine 12 IU, Injection S / C
I-191, i-NORDITROPIN Ipeni isethi i-24, i-Somatropine 24 IU, Injection S / C
I-192, i-Norditropin SimpleXx
I-10mg / 1.5ml, Somatropin, Inj /
I-193, i-Norditropin SimpleXx
I-194, i-Norditropin SimpleXx
I-5mg / 1.5 ml, iSomatropin, i-Inj esibayeni esigcwalisiwe
I-10mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj. esibayeni Esigcwalisiwe
I-15mg / 1.5 ml, iSomatropin, Inj. esibayeni Esigcwalisiwe
I-198, i-NORFLEX, i-Orphenadrine citrate 30mg / ml, injekishini
I-199, i-NORFLEX 100, i-Orphenadrine citrate 100mg, amaphilisi
I-200, i-NORGESIC, i-Orphenadrine citrate i-35mg Paracetamol 450mg, amaphilisi
I-201, NUBAIN 10mg / ml, i-Nalbuphine HCL 10mg / ml, injekishini
I-202, NUBAIN 20mg / ml, i-Nalbuphine HCL 20mg / ml, injekishini
I-203, i-Nuvaring, i-Etonogestrel ne-Ethinylestradiol, iring ye-Vaginal
I-204, i-ORAP, i-Pimozide 1mg, amaphilisi
I-205, i-ORAP Forte, i-Pimozide 4mg, amaphilisi
I-206, i-OXETINE, i-Fluoxetine Hydrochloride 20mg, amaphilisi
I-208, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg, Paracetamol 500mg, Ithebhulethi
I-210, i-PHYSEPTONE, iMethadone HCL 10mg / ml, injekishini
I-211, i-PHYSEPTONE 5, i-Methadone HCL 5mg, i-Tablets
I-213, PREPULSID, Cisapride 30mg, Supp.
I-214, I-PREPULSID 10mg, i-Cisapride 10mg, amaphilisi
I-215, I-PREPULSID 5mg, i-Cisapride 5mg, amaphilisi
I-216, i-PRIMOTESTONE idepho i-100mg, iTestosterone Enanthate 110mg, iTestosterone Propionate 25mg, = iTestosterone 100mg / ml, injekishini
I-217, i-PRIMOTESTONE idepho i-250mg, i-Testosterone enanthate 250mg / 1ml, In injion
I-218, i-PROGYLUTON, ithebhu ye-Estradiol Valerate 2mg / 11white., I-Estradiol Valerate 2mg kanye neNorgestrol 0.5mg / 10 ithebhu yewolintshi.
I-220, I-PROKINATE 10mg, i-Cisapride 10mg, amaphilisi
I-221, I-PROKINATE 5mg, i-Cisapride 5mg, amaphilisi
I-222, PROLIXIN 25mg / ml, i-Fluphenazine decanoate 25mg / ml, injekishini
I-223, PROPESS, Prostaglandin E2 10mg / pessary, ama-Vaginal Pessaries
I-224, i-PROTHIADEN 25, iDothiepin HCl 25mg, Amakhandlela
I-225, i-ProTHIADEN 75, iDothiepin HCl 75mg, amaphilisi
I-226, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Amathebulethi
I-227, i-ProZAC, i-Fluoxetine 20mg, amaphilisi
I-228, i-PROZAC, i-Fluoxetine 20mg / 5ml, i-Liquid
I-229, i-ProZAC Njalo ngeviki i-90mg, i-Fluoxetine (njengo-F. Hydrochloride) i-90mg / i-capsule, Amakhandlela
I-230, I-REDUCTIL 10mg, iSibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, Amakhandlela
I-231, I-REDUCTIL 15mg, iSibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, Amakhandlela
I-232, i-REMERON 15 mg, iMirtazapine 15mg, amaphilisi
I-233, i-REMERON 30 mg, iMirtazapine 30mg, amaphilisi
I-234, i-REMERON 45 mg, iMirtazapine 45mg, amaphilisi
I-235, i-Remeron Sol Tab 30mg, Mirtazapine, Amathebulethi
I-236, REVACOD, i-Codeine Phosphate 10mg, ithebhu yeParacetamol 500mg / 1., Amaphilisi
I-237, RHINOTUSSAL, Dextromethorphan HBr 20mg Phenylephrine HCL 20mg, Carbinoxamine maleate 4mg, Capsule
I-239, i-RISPERDAL 1, iRisperidone 1mg, amaphilisi
I-240, i-RISPERDAL 1mg / ml, i-Risperidone 1mg / 1ml, Isixazululo Somlomo
I-241, i-RISPERDAL 2, iRisperidone 2mg, amaphilisi
I-242, i-RISPERDAL 3, iRisperidone 3mg, amaphilisi
I-243, i-RISPERDAL 4, iRisperidone 4mg, amaphilisi
I-247, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Amathebulethi
I-248, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg / 1tab., Ithebhulethi
I-249, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, Amaconsi
I-250, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Amathebulethi
I-251, RIVOTRIL 1mg / ml, Clonazepam 1mg / ml, injekishini
I-252, i-RIVOTRIL 2, i-Clonazepam 2mg, amaphilisi
I-253, ROACCUTANE 10, Isotretinoin 10mg, Amakhandlela
I-254, ROACCUTANE 2.5, Isotretinoin 2.5mg, Amakhandlela
I-255, ROACCUTANE 20, Isotretinoin 20mg, Amakhandlela
I-256, ROACCUTANE 5, Isotretinoin 5mg, Amakhandlela
I-257, i-ROBAXIN, iMethocarbamol 100mg / ml, injekishini
I-258, i-ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, ithebhulethi
I-259, i-ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg, Aspirin 325mg, Ithebhulethi
I-260, ROBITUSSIN-CF, Dextromethorphan HBr 10mg, Guaifenesin 100mg, Pseudoephedrine HCl 30mg / 5ml, Syrup
I-261, i-ROMILAR 1.5%, i-Dextromethorphan 15mg / ml, Amaconsi
I-262, i-ROMILAR 15, i-Dextromethorphan 15mg, iDragees
I-263, ISIVIVINYO SE-ROMILAR, Dextromethorphan 3.06mg, Ammonium chloride 18mg, Panthenol 11mg / 1ml, Syrup
I-264, i-SAIZEN 4 IU, iSomatropine 4 IU, injekishini
I-265, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, Amakhandlela
I-266, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg / ml, injekishini
I-267, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg / ml, injekishini
I-268, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg / ml, injekishini
I-269, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg / ml, injekishini
I-270, I-SAROTEN Ibuyise i-25, i-Amitriptyline HCL 25 mg, Amakhandlela
I-271, I-SAROTEN Ibuyise i-50, i-Amitriptyline HCL 50 mg, Amakhandlela
I-272, i-SEDOFAN DM, i-Dextromethorphan HBr 10mg i-Triprolidine 1.25mg, i-Pseudoephedrine HCL 30mg / 5ml, Syrup
I-273, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, amaphilisi
I-274, i-SERENACE 0.5, iHaloperidol 0.5mg, Amathebulethi
I-275, i-SERENACE 1.5, iHaloperidol 1.5mg, Amathebulethi
I-276, i-SERENACE 10, iHaloperidol 10mg, Amathebulethi
I-277, i-SERENACE 5, iHaloperidol 5mg, Amathebulethi
I-278, i-SEROQUEL 100 mg, i-Quetiapine 100 mg, Amathebulethi
I-279, i-SEROQUEL 200 mg, i-Quetiapine 200 mg, Amathebulethi
I-280, i-SEROQUEL 25 mg, i-Quetiapine 25 mg, Amathebulethi
I-281, ISEROQUEL Isiguli Somugqa Womuguli, I-Quetiapine 100 mg / ithebhu. (Amaphilisi we-2), i-Quetiapine 25 mg / ithebhu. (Amaphilisi we-6), Amathebulethi
I-282, i-SEROXAT 20, iParoxetine 20mg, Amathebulethi
I-283, i-SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Ithebhulethi
I-284, i-SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Ithebhulethi
I-285, i-SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Ithebhulethi
I-286, i-SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Ithebhulethi
I-287, i-SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Ithebhulethi
I-288, i-SIRDALUD 2, iTizanidine 2mg, amaphilisi
I-289, i-SIRDALUD 4, iTizanidine 4mg, amaphilisi
I-290, i-SOMADRYL, i-Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg, i-Caffeine 32mg, amaphilisi
I-291, SONATA 10mg, Zaleplon 10mg / 1capsule, Amakhandlela
I-292, SONATA 5mg, Zaleplon 5mg / 1capsule, Amakhandlela
I-293, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, amaphilisi
I-294, ST.JOSEPH ukukhwehlela, i-Dextromethorphan HBr 0.1179% w / w, Syrup
I-295, STADOL 1mg / ml, iButorphanol tartrate 1mg / ml, injekishini
I-296, STADOL 2mg / ml, iButorphanol tartrate 2mg / ml, injekishini
I-297, STADOL 4mg / 2ml, i-Butorphanol tartrate 4mg / 2ml, Injection
I-298, STELAZINE 1, iTrifluoperazine 1mg, Ithebhulethi
I-299, STELAZINE 10, Trifluoperazine 10mg, Amakhandlela
I-302, STELAZINE 5, iTrifluoperazine 5mg, Ithebhulethi
I-303, STEMETIL, i-Prochlorperazine i-male man 0.1% w / v, Syrup
I-304, STEMETIL, i-Prochlorperazine male 25mg, i-Tablets
I-305, STEMETIL, i-Prochlorperazine male 5mg, i-Tablets
I-306, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg / ml, injekishini
I-307, STEMETIL, i-Prochlorperazine male 25mg / 2ml, injekishini
I-308, STERANDRYL RETARD 250mg, iTestosterone Hexahydrobenzoate 125mg, iTrans-hexahydroterephtalate ye-n-butyl ne-Testosterone 125mg / ampoule, Injection
I-309, STESOLID, I-Diazepam 0.4mg / ml, iSyrup
I-310, STESOLID, I-Diazepam 2mg, Amathebulethi
I-311, STESOLID, I-Diazepam 5mg, Amathebulethi
I-312, STESOLID, I-Diazepam 5mg / ml, injekishini
I-313, STESOLID, Diazepam 5mg / 2.5ml, Isixazululo
I-314, STESOLID, Diazepam 10mg / 2.5ml, Isixazululo
I-315, STILNOX 10mg, ithebhulethi yeZolpidem Tartrate 10mg / 1., Amaphilisi
I-316, STIVANE 300, Pyrisuccideanol dimaleate 300mg, Amakhandlela
I-319, SURMONTIL 25, i-Trimipramine male 35mg, amaphilisi
I-320, SURMONTIL 50, i-Trimipramine male 69.75mg, Amakhandlela
I-321, i-SUSTANON 250mg, iTestosterone Propionate 30mg, iTestosterone Phenylpropionate 60mg, iTestosterone isocaproate 60mg, i-testosterone decanoate 100mg
I-322, TEKAM 10, iKetamine HCL 10mg / ml, injekishini
I-323, TEKAM 50, iKetamine HCL 50mg / ml, injekishini
I-324, TEMGESIC 0.3mg / ml, iBuprenorphine HCL 0.3 mg / ml, injekishini
I-326, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Amathebulethi
I-327, i-TIAPRIDAL 100, iTiapride 100mg, iThebhulethi
I-328, i-TIAPRIDAL 100mg / 2ml, iTiapride 100mg / 2ml, injekiseni
I-329, TICLID, Ticlopidine 250mg, Amathebulethi
I-331, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Amathebulethi
I-332, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Amathebulethi
I-333, i-TRAMAL 100mg, iTramadol 100mg, Ukuhlinzeka.
I-334, ITRALAL 100mg / 2ml, iTramadol 100mg / 2ml, injekishini
I-335, ITRALAL 100mg / ml, iTramadol 100mg / ml, Amaconsi
I-336, i-TRAMAL 50mg, iTramadol 50mg, Amakhandlela
I-337, i-TRAMAL 50mg / ml, iTramadol 50mg / ml, injekishini
I-338, ITRALAL retard 100, iTramadol 100mg, iThebhulethi
I-339, ITRAMUNDIN RETARD 100 mg, iTramadol 100mg, iThebhulethi
I-340, ITRAMUNDIN RETARD 150 mg, iTramadol 150mg, iThebhulethi
I-341, ITRAMUNDIN RETARD 200 mg, iTramadol 200mg, iThebhulethi
I-342, i-TRANXENE 10, i-Clorazepate dipotassium 10mg, Amakhandlela
I-343, i-TRANXENE 5, i-Clorazepate dipotassium 5mg, Amakhandlela
I-344, i-TREXAN 50, iNaltrexone HCL 50mg, amaphilisi
I-345, i-TRISEQUENS, i-Oestradiol 2mg (ithebhu eluhlaza okwesibhakabhaka), i-Oestradiol 2mg, i-Norethisterone acetate 1mg (ithebhu emhlophe), i-Oestradiol 1mg (ithebhu elibomvu), Ithebhulethi
I-346, i-TRISEQUENS forte, i-Oestradiol 4mg (ithebhu ephuzi), i-Oestradiol 4mg, i-Norethisterone acetate 1mg (ithebhu emhlophe), i-Oestradiol 1mg (ithebhu ebomvu), amaphilisi
I-347, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Amathebulethi
I-349, TUSSIFIN ene-codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg, Glyceryl guaicolate 1gm, Sodium benzoate 3gm, Potassium citrate 3gm, Liquorice 7.5gm / 100ml
I-350, i-ULTIVA 1mg, i-Remifentanil 1mg / vial, Injection
I-351, i-ULTIVA 2mg, i-Remifentanil 2mg / vial, Injection
I-352, i-ULTIVA 5mg, i-Remifentanil 5mg / vial, Injection
I-356, i-VALIUM 10, i-Diazepam 10mg, Amathebulethi
I-357, i-VALIUM 2, i-Diazepam 2mg, Amathebulethi
I-358, i-VALIUM 5, i-Diazepam 5mg, Amathebulethi
I-359, ISIQINISEKISO SE-VECURONIUM SOKUTHENGA I-10mg, i-Vecuronium Bromide 10mg / i-1 vial, Powder for Injection
I-360, ISIQINISEKISO SE-VECURONIUM SOKUTHENGA I-20mg, i-Vecuronium Bromide 20mg / i-1 vial, Powder for Injection
I-361, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Amakhandlela
I-362, VIRORMONE 10mg, iTestosterone Propionate 10mg, In injion
I-363, VIRORMONE 10mg, iTestosterone Propionate 10mg, amaphilisi
I-364, VIRORMONE 25mg, iTestosterone Propionate 25mg, amaphilisi
I-365, VIRORMONE 25mg, iTestosterone Propionate 25mg, In injion
I-366, i-XANAX 0.25, i-Alprazolam 0.25 mg, Amathebulethi
I-367, i-XANAX 0.5, i-Alprazolam 0.5 mg, Amathebulethi
I-368, i-XANAX 1, i-Alprazolam 1 mg, Amathebulethi
I-370, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Amathebhulethi
I-371, ZYPREXA 10 mg, i-Olanzapine 10 mg, Amathebulethi
I-372, ZYPREXA 10 mg, i-Olanzapine 10 mg, In injion
I-373, ZYPREXA 5 mg, i-Olanzapine 5 mg, Amathebulethi
I-374, ZYPREXA 7.5 mg, i-Olanzapine 7.5 mg, Amathebulethi
IMISEBENZI KAMAHHALA / IZIMALI
UMasipala wase-Abu Dhabi IKhabhalari leKhabinedi
Ajman Chamber Wezentengiselwano & Imboni Ikhomishini Yokuhlela
UMasipala wase-Abu Dhabi Umnyango Wezolimo
I-Dubai Civil Defense UMnyango Wezamandla we-Atomic
I-Dubai Chamber of Commerce & Imboni Ministry of Chemical & Umanyolo
UMasipala waseDubai Ministry of Civil Aviation
Federal National Council Ministry of wamalahle & Izimayini
I-Federation of UAE Chambers Of Commerce & Umkhakha Umnyango Wezokuhweba Nezimboni
Umnyango Wezomnotho Nezokuhweba UMnyango Wezokuxhumana
Ministry of Electricity namanzi Umnyango Wezindaba Zabasebenzi
UMnyango Wezempilo UMnyango Wezindaba Zabathengi kanye Nokusatshalaliswa Komphakathi
UMnyango Wezwe UMnyango Wezamasiko
Umnyango Wezemfundo Nentsha Ministry of Disinvestment
Umnyango Wezimali Nezimboni Umnyango Wezemvelo Namahlathi
Umnyango Wezokuhlela Umnyango Wezangaphandle
UMasipala waseSharjah Umnyango Wezimali
USharjah Chamber Wezokuhweba Nezimboni Umnyango Wezimboni Zokusebenzisa Ukudla
Uhulumeni wase-UAE Ministry of Health kanye Nenhlalakahle Yomndeni
Ubudlelwano be-AUE-INDIA Besizwe
Ukuxhumana kwe-UAE kwezomnotho, kwezepolitiki nakwezamasiko neNdiya, okuvela emuva eminyakeni engaphezu kwekhulu edlule, kuyavuthwa futhi kunokubukeka okuhlukahlukene. Ukuhweba ngezigaba kukhule ngokuqinile njengoba iminyaka ihamba futhi ukuxhumana kwabantu nabantu kuya kwanda njalo. Abavakashi abavela ezinhlangothini zombili bavakashela ukuzilibazisa nokuzijabulisa, futhi abantu abaningi base-UAE batholakala ezindaweni zokunakekela ezempilo nezokuvakasha eNdiya.
Ukusondelana kobudlelwano phakathi komphakathi wamaNdiya kanye nezizwe kungahlulelwa ngenxa yokuthi umphakathi wamaNdiya ungumphakathi omkhulu wokudlulela e-UAE, ongabalelwa ezigidini ezingama-1.5. Izibopho eziqinile zobungani phakathi kwe-UAE neNdiya zilungele ukuhlukaniswa futhi ziqiniswe ezinyangeni naseminyakeni ezayo.
Imibiko yengxoxo neNxusa laseNdiya ku-UAE Talmiz Ahmed.
Ubudlelwano phakathi kwe-UAE neNdiya buqinile futhi bususelwa ekuxhumaneni ngamasiko phakathi kwabantu bala mazwe womabili. Yini ubudlelwano bomlando obuhlanganisa lezi zizwe zombili futhi yiziphi izindlela ezintsha zokuqinisa izibopho zazo zamasiko namasiko?
Ubudlelwano baseNdiya nase-UAE buzosiza. La mazwe womabili abelana ngezibopho zobumbano lwamasiko futhi anokuxhumana okuqinile kwezentengiso namasiko. Amathayi ethu akhulayo afaka uhla oluphelele lwezinkambu zezomnotho, ezobuchwepheshe, zenhlalo nezamasiko eziwusizo kuhulumeni nobabili.
Umfutho ebuhlotsheni obukhulayo beNdiya namazwe aseGulf, ikakhulukazi i-UAE, wanikezwa ngokuvakasha kukaNgqongqoshe Wezangaphandle uShaikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan eNdiya ngoJuni. Ngesikhathi sokuvakasha, izinhlangothi zombili beziba nezingxoxo ezithelekayo futhi ezinamandla ezifundweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi ubudlelwano bezwe, isimo sesifunda, ukuphepha, ukuzivikela namandla avuselelekayo. Kusukela ohlangothini lwaseNdiya, lowo owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle ngaleso sikhathi uPranab Mukherjee kanye noNgqongqoshe Wezokuhweba Nezimboni uKamal Nath wayevakashele i-UAE ngoMeyi nango-Ephreli 2008, ngokulandelana.
Ubudlelwano bethu abunqunywa yizici zokuhweba nezomnotho kuphela. AmaNdiya ayekhona e-UAE esikhathini eside ngaphambi kokuba kutholakale uwoyela futhi abambe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni izwe. Kade bebalingani abasebenzayo nabaphathi babo be-Emirati. Abaholi be-UAE bavume kaningana ngeminikelo eyenziwe ngamaNdiya emikhakheni ehlukene.
Yini intuthuko emikhakheni yamabhizinisi nokuhweba phakathi kwala mazwe amabili?
I-India ne-UAE benza imizamo eqine yokuvuselela kanye nokuqinisa ubudlelwano bezomnotho kanye nokuhwebelana. Ubudlelwano phakathi kwala mazwe womabili buguqukele ekubambisaneni okubalulekile emkhakheni wezomnotho nokuhweba, ne-UAE evela njengomakethe wesibili ngobukhulu emhlabeni jikelele wemikhiqizo yaseNdiya. Ngasikhathi sinye, amaNdiya avele njengabatshalizimali ababalulekile e-UAE, naseNdiya njengendawo ebalulekile yokuthumela ngaphandle yezimpahla ezenziwa e-UAE.
Kwakungenzeka kanjani ukuhweba okwenziwa kabili phakathi kwala mazwe amabili ngonyaka owedlule? I-India-UAE ukuhweba okungewona owoyela okulinganiselwa ku- $ 29,023.68 ku- 2007-2008. Ukuhweba okunezindlela ezimbili kwe-2007-2008 kubonise ukukhula kwe-40 ngamaphesenti ngonyaka owedlule. Izinto eziphambili ezithunyelwa ngaphandle zivela eNdiya zazihlanganisa amaminerali amnyama, amaparele emvelo noma akotiniwe, okusanhlamvu, amatshe ayigugu nobucwebecwebe, indwangu eyenziwe ngendwangu, izindwangu, izinsimbi, intambo kakotini, imikhiqizo yasolwandle, imishini nemishini, amapulasitiki nemikhiqizo ye-linoleum, itiye nenyama namalungiselelo. Izinto ezinkulu zokungeniswa ezivela e-UAE zifaka amafutha amaminerali, owoyela bamaminerali, amaparele wemvelo noma okotiniwe, amatshe ayigugu noma anenani eliphakeme, i-ores yensimbi & indali yensimbi, isibabule kanye nensimbi yensimbi engafakwanga, imishini kagesi nemishini nezinto zayo, i-iron nensimbi njll.
Ingxenye enkulu yempahla ethunyelwa ngaphandle e-India iye e-UAE idluliselwa kwamanye amazwe isuka eDubai iye kwamanye amazwe esifundeni njengePakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Yemen kanye, sekwephuzile, ngisho nasemazweni ase-East Africa. Ngakho-ke, ukuthunyelwa kwamanye amazwe e-UAE, empeleni kuye kwavula imakethe enkulu yesifunda yemikhiqizo yaseNdiya.
Ngabe kukhona isilinganiso sokukhula okuthe xaxa kwezokuhweba kanye nokutshalwa kwezimali phakathi kwamazwe womabili?
Ukwanda okukhulu kwezokuhweba kwethu kwezinhlangano ezimbili, ikakhulukazi emkhakheni ongewona owoyela, kuyizinkomba zokukhula nokujula kwezomnotho zombili. Izinkampani zaseNdiya nase-UAE zibamba iqhaza ekuphishekeleni ukutshalwa kwezimali namaphrojekthi kuwo womabili amazwe. Lezi zinhlelo zokubambisana zihlanganisa ezinye zezinkampani ezibaluleke kakhulu ezivela eNdiya ezinjengeTata, Reliance, Wipro, NTPC, Larsen & Toubro, Dodsals nePunj Lloyd. Ukusuka ohlangothini lwe-Emirati, izinkampani eziphezulu ezisebenza eNdiya yi-Emaar, Nakheel, DP World, njll. Ngo-Okthoba wonyaka ophelile, kwasayinwa iMoU phakathi kwe-UAE University ne-Atul Limited yase-India ukuze kubanjiswane ngobuchwepheshe bokudlulisa ubuchwepheshe ukusetha umbuso- iyunithi lokukhiqizwa kwezakhi zesiko lezicubu zesundu kuRajasthan.
Yiliphi inani elilinganisiwe labantu baseNdiya namabhizinisi e-UAE?
Kulinganiselwa ukuthi cishe ama-1.5 amaNdiya ayisigidi ahlala e-UAE. Akunabaningi abashiya izwe esikhathini esedlule esedlule. Uhlupho lomhlaba lusebenze nje ekuqiniseni ukusukela kude nomsebenzi wokuqagela ngaphandle kokubanga nomthelela omubi kumandla amakhulu, ingqalasizinda kanye namaphrojekthi wezezakhiwo ezenziwa ezweni, ikakhulukazi eDubai nase-Abu Dhabi, njengoba imali itholakala kalula imisebenzi enjalo ehlobene nentuthuko. Ngakho-ke, ubunzima bomnotho obukhona njengamanje abuhle bube namthelela omkhulu ekuqesheni amaNdiya.
Sinjani isimo sezokuvakasha phakathi kwala mazwe amabili?
Umkhakha Wezokuvakasha ungenye yezindawo ezinamandla amahle okukhula esikhathini esizayo, ikakhulukazi ezokuvakasha. Abakwa-Emiratis abaya e-India sebesebenzisa izinsizakalo zezempilo zaseNdiya, kufaka phakathi izikhungo nama-spas ayurvedic. Enye indawo enobubanzi obukhulu bokusebenzisana kwezokuvakasha ukwakha nokwakhiwa kwamahhotela. Kukhona isilinganiso esihle se-UAE sokutshala imali emkhakheni wezokuvakasha owedlule e-India, okungasiza ukuheha izivakashi ezivakashele i-UAE ziye eNdiya.
Ngabe kuzoba nesigaba esisha, esinamandla ngokwengeziwe ebudlelwaneni be-UAE-India ngokuzayo?
Ibonisa amaqiniso omhlaba, izibopho phakathi kweNdiya ne-UAE zithola isici esisha. La mazwe womabili asungule ubudlelwano obuqinile emkhakheni wezohwebo nokuhweba. Lokhu kusebenzisana kuyanda, kuhlukanisa futhi kuphumela ebambisaneni elinamasu okugcizelela ukubambisana kwezokuvikela, amandla, njll. I-UAE njengomakhelwane izonakwa kakhulu ekuthuthukiseni ubudlelwano bethu.
Womabili la mazwe angabambisana ngokubambisana nangasekhaya futhi esifundeni ezindabeni zezokuvikela nezokuphepha futhi abambisane ekulweni komhlaba wonke ukulwa nobushokobezi nokuqagela.
Njengoba i-UAE igxile kwezimboni ezisuselwa kolwazi kanye neNdiya evelayo njengabaholi bomhlaba osendaweni, ezolimo, amakhemikhali kanye ne-biyo-technology, kukhona ubukhulu bokubambisana ekudluliseleni ubuchwepheshe, i-R&D kanye nasekuqhubekeni okuhlangene. Ukusebenzisana kwezokuvikela kufinyelele ezingeni eliphezulu ngokuzivocavoca komoya okwenziwa njalo e-India-UAE kanye nomhlangano weKomidi Lokubambisana Wezokuvikela eNdiya. I-India yathola ukwesekwa okuqinile kohlangothi lwe-UAE mayelana nodaba lobuphekula, ikakhulukazi ekuhlaselweni kwamaphekula eMumbai ngoNovemba ngonyaka owedlule.
Ezomnotho kanye nezoHwebo
Izixhumanisi zokuhweba phakathi kweNdiya ne-UAE bezikhona kusukela kudala. Ukukhula kobudlelwano bezomnotho nezentuthuko kwe-Indo-UAE kunomthelela ekuzinzeni okubalulekile namandla ebudlelwaneni obuphakathi kwamazwe womabili. I-UAE ithokozela ubudlelwane obubanzi nobubanzi bezomnotho neNdiya, bususelwa ezintshisakalweni ezihambisanayo.
Umthamo wezohwebo wamazwe amabili wamanje uthi lesi yisikhathi esijabulisayo emlandweni wobudlelwano bezomnotho be-UAE-India. Ngokusho kukahulumeni wase-India izibalo i-UAE ngumlingani ophambili wezentengiselwano eNdiya kulo nyaka wezimali u-2008-09, ngasikhathi sinye Izibalo zikahulumeni wase-UAE zikhombisa i-India njengomlingani wayo ophambili wezentengiso e2008.
Ngokwezibalo zikahulumeni waseNdiya, ukuthengiselana okukhona phakathi kweNdiya - i-UAE kulo nyaka wezimali ngo-Ephreli 2008 - Mashi 2009 kwakungu-US $ 44.53 billion uma kuqhathaniswa ne-US $ 29.11 billion ngesikhathi esifanayo ngo-Ephreli 2007- Mashi 2008, ukukhuphuka nge-52.95% . Ngokwezibalo zikahulumeni wase-UAE, ku-2008 i-UAE - ukuhwebelana kwamazwe amabili eNdiya kukhuphuke ngamaphesenti ama-48 kusuka ku-2007 ukufika cishe kuma-USD 32 billion, okubalwe ngamaphesenti ama-15 amaphesenti we-Emirates 'yokuhweba kwangaphandle.
Ukuthunyelwa kwaseNdiya e-UAE ikakhulukazi kufaka amagugu nobucwebe, imifino, izithelo, izinongo, izimpahla zobunjiniyela, itiye, inyama namalungiselelo alo, ilayisi, izindwangu nezingubo namakhemikhali. Ukungeniswa kwase-India okuvela e-UAE ikakhulukazi kufaka phakathi imikhiqizo engcolile neye-petroleum, igolide nesiliva, amaparele, amatshe ayigugu futhi ahlonishwayo, izinsimbi zensimbi kanye nesikhuhlu sensimbi, izimpahla zikagesi kanye nemishini yokuhamba.
Ukutshalwa kwezimali e-UAE eNdiya nakho kufakazelwe ukukhula okukhulu eminyakeni yamuva. I-UAE itshale imali engaphezulu kwezigidigidi ezingama-USD 5 eNdiya ngemizila ye-FDI (Foreign Direct Investment) kanye ne-FII (Foreign Institutional Investors) izindlela ezenza i-UAE ingenye yabatshalizimali abaphezulu eNdiya. Izinkampani ezinkulu ze-UAE ezitshalwe eNdiya umhlaba we-DP, i-Emaar Group, i-Al Nakheel, i-ETA Star Group, i-SS Lootah Group, i-Emirates Techno Casting FZE, i-RAK Investment Authority, iDamas Jewelery ne-Abu Dhabi Commercial Bank.
I-India nayo ingumtshalizimali omkhulu wesithathu e-UAE. Izinkampani zaseNdiya ezinjengeL&T, Punj Lloyd, Hinduja Group, Pioneer Cement, i-Oberoi Group of Hotel, zinamaphrojekthi ahlanganisiwe e-UAE. Ngemuva kokuvela kwe-UAE njengesikhungo esikhulu sokuthengisela kabusha, izinkampani zaseNdiya ziye zavela njengabatshalizimali ezibalulekile ezindaweni zokuhweba zamahhala njengeJebel Ali FTZ, Isikhumulo sezindiza iSharjah, iHamariya Free Zones ne-Abu Dhbai Industrial City.
Isizathu esiphawuleka sokubopha okunamandla kwezomnotho kwe-Indo-UAE siyisibalo esikhulu sabantu baseNdiya abase-UAE. Cishe abayizigidi ezingama-2 abadingiswa amaNdiya njengamanje bahlala futhi basebenza e-UAE, enamaphesenti angaphezu kwangu-30 wabantu besizwe futhi enza iqembu elikhulu labaphesheya kwe-Emirates. Umphakathi wokudingida nawo unesandla emnothweni waseNdiya. Imali ekhokhelwe i-India ibuya e-UAE e-2008-09 yayicishe ibe yi-USD 10 -12 billion, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yemali yonke ekhokhelwa ukusuka emazweni we-GCC iya e-India okuyi-USD 32-25 billion.
Izixhumanisi Zomoya phakathi kwamazwe amabili
Kukhona izindiza ezingaphezu kwe-475 ngesonto phakathi kokuya eNdiya nase-UAE, kwabelwane nge-Emirates, Etihad, Air Arabia, Kingfisher, Jet Airways, Air India ne-Air India Express. Kulezi izindiza ezintathu ze-UAE kuzwelonke (i-Emirates, i-Etihad ne-Air Arabia) zisebenza cishe ngezindiza ze-304 ngesonto ezimelela cishe i-64% yezindiza eziphelele ezisebenza kulo mkhakha.
I-India kanye ne-United Arab Emirates nabo baneSivumelwano Sezinsizakalo Zomoya (ASA). Isivumelwano sivumela amazwe womabili ukuthi aqoke noma yiliphi inani lezindiza ukuze kusetshenziswe izinsizakalo okuvunyelenwe ngazo lapho izwe elithile lizonikeza khona imvume nemvume efanelekile.
Qinisa ukubambisana phakathi kwezikhungo zemfundo ezeqile ze-UAE namayunivesithi aseNdiya kanye nezikhungo eziphakeme zocwaningo. Ugqugquzele ukusebenzisana kwezesayensi, kubandakanya nezindawo zamandla avuselelekayo, intuthuko esimeme, ezolimo ezomileyo, imvelo yasogwadule, ukuthuthukiswa kwamadolobha nokunakekelwa kwezempilo okuthuthukile.
USheikh Zared - Umholi Oyisisekelo
UShaking wakhe uShe Zared bin Sultan Al Nahayan, umsunguli we-United Arab Emirates, wazalelwa e-1918 e-Abu Dhabi. Wayengomncane emadodaneni amane kaSheikh Sultan bin Zayed, owayephethe u-Abu Dhabi wase1922 - 1926. USheikh Zayed wathutha nomndeni wakhe besuka e-Abu Dhabi baya e-Al Ain, lapho athola khona imfundo yakhe yezenkolo futhi wafunda imigomo ye-Islam futhi wafunda i-Qur'an Engcwele. USheikh Zared wayekuthanda ukukhohlisa futhi wayekuthanda ukuzingela neminye imidlalo yendabuko njengokujaha kwamakamela nokugibela amahhashi.
E-1946, uSheikh Zared waqokwa njengombusi endaweni eseMpumalanga ye-Abu Dhabi (Al Ain) kwathi kuleyo minyaka eyi-20 ayichitha njengombusi wase-Al Ain, akazange ayekele imizamo yokuthuthukisa nokwakha amadolobhana ale ndawo.
Ku-1966, uSheikh Zared waba nguMbusi wase-Abu Dhabi futhi ngenkathi esebenza ekuthuthukiseni izithandani, akha izikole, izibhedlela kanye nemigwaqo, umqondo wakhe wezepolitiki nombono wakhe wekusasa waphenduka ukunaka kwakhe ekubumbeni nabamazwe angomakhelwane be-Arabian Gulf. Wayengowokuqala ukubiza ukwakhiwa kwe-United Arab Emirates ngokushesha ngemuva kokuba iBrithani imemezele ukuthi izosuka esifundeni. NgoDisemba 2 nd, i-1971, uSheikh Zwed kanye nababusi bezinduna eziyisithupha ezingomakhelwane ngokusemthethweni bamemezele ngokusemthethweni ukuthi i-United Arab Emirates kanti iphupho likaShakaniya Zared lagcwaliseka.
Selokhu yasungulwa, uSheikh Zared wasebenza nabafowabo, ababusi bezempi, ekwenzeni izwe laba yintsha futhi laba yizwe elichuma kakhulu esifundeni. Uyiphathe ngokuhlakanipha imali yezwe likazwelonke ukukhulisa izinga lokuphila kwezakhamizi kanye nezakhamizi ze-UAE futhi ibanikeze impilo engcono. Ubuhlakani bezepolitiki nezika-Sheikh Zayed bezizwakala ngaphakathi nangaphandle kwezwe. Wathola ukuhlonishwa nokuhlonishwa okungakaze kubonwe esifundeni nakwamanye amazwe.
USheikh Zared udlule emhlabeni ngoNovemba 2 nd 2004, kepha usaphila kwinkumbulo yezwe yabaholi abakhulu nasezinhliziyweni nasezingqondweni zabantu bakhe ezizukulwaneni ezizayo.
I-United Arab Emirates umbuso wombuso ozimele, owasungulwa e-1971. Imizamo ehlanganisiwe kahulumeni wayo yenziwa ngenhloso yokuqhakambisa ukuchuma nentuthuko ku-UAE kuzo zonke izindawo nokunikeza impilo enhle kunazo zonke izakhamizi zase-UAE.
Ukuphakama kwakhe uSheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan wakhethwa njengoMongameli we-United Arab Emirates ngomhla ka-3rd kaNovemba, i-2004 ngemuva kokudlula kukayise ongasekho uHH Sheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan, owayengumongameli wokuqala we-UAE .
Izibopho zikaMongameli we-UAE
Qondisa umkhandlu ophakeme futhi uphathe izingxoxo zawo.
Biza umkhandlu ophakeme ngemihlangano futhi uyihambise njengemithetho yenqubo evunyelwe umkhandlu esinqumeni sayo sangaphakathi. Umkhandlu kumele ucelwe ukuthi ube nomhlangano noma nini lapho ucelwa yiliphi elinye lamalungu awo.
Cela umhlangano ohlanganyelwe nomkhandlu ophakeme kanye ne-federal cabinet uma kunesidingo.
Sayina futhi ukhiphe imithetho yenhlangano, izinqumo nezinqumo ezenziwa umkhandlu omkhulu.
Qoka uNdunankulu, amukele ukwesula kwakhe, futhi amshiye esikhundleni sakhe ngokuvunyelwa ngumkhandlu ophakeme, aqoke iPhini likandunankulu kanye noNgqongqoshe, bemukele ukwesula kwabo babacele ukuba bashiye ezikhundleni zabo ngokwesiphakamiso sikandunankulu. ungqongqoshe.
Misa abamele abamele inxusa emazweni angaphandle nakwamanye amazwe amakhulu, kanye nabasebenzi bezempi ngaphandle kukamongameli kanye namajaji ezinkantolo eziphakeme, bayemukela incwadi yokwesula kwabo futhi ubacele ukuthi bashiye phansi imvume yokuvunyelwa yikhabhinethi. Ukuqokwa okunjalo, ukwamukela ukwesula noma ukuxoshwa kuzokwenziwa ngokwezimiso nangokuhambisana nemithetho yenhlangano.
Ukusayinwa kwezincwadi zokufakazelwa kwabamele izizumbulu zeNhlangano emazweni angaphandle nasezinhlanganweni kanye nokwamukela ubufakazi babameli babameli bamazwe angaphandle kwiNyunyana nokuthola izincwadi zabo zokuvuma. Ngokufanayo uzosayina amadokhumenti okuqokwa kanye nokufakazelwa kwabameli.
Ukwengamela ukwenziwa kwemithetho yamadlelandawonye, ​​izinqumo nezinqumo ngokusebenzisa i-federal cabinet kanye nongqongqoshe abanekhono.
Melela umfelandawonye ngaphakathi ezweni naphesheya kanye nakubo bonke ubudlelwano bamanye amazwe.
Sebenzisa ilungelo lokuxolelwa noma ukuncishiswa kwenhlawulo bese uvuma izigwebo zekomkhulu ngokuhambisana nezinhlinzeko zomthethosisekelo kanye nemithetho yenhlangano.
Kudluliswa imihlobiso nezindondo zokuhlonipha, zombili nezomkhosi, ngokuya ngemithetho ephathelene nokuhlobisa okunje nezindondo.
Noma yimuphi omunye amandla aphathiswe wona nguMkhandlu Ophakeme noma ophathiswe wona ngokuhambisana nalo Mthethosisekelo noma nemithetho yenhlangano.
I-Biography of His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Ukuphakama kwakhe uSheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan kungumongameli wesibili we-United Arab Emirates, okumenyezelwe ukusungulwa kwakhe nge-2 nd kaDisemba, i-1971. Ungumbusi weshumi nane nesithupha we-Abu Dhabi, okuyiwona omkhulu kunabo bonke kwababusi bezempi abakha umfelandawonye.
Ukuphakama kwakhe kwathatha igunya lesisekelo sombuso njengoMongameli we-UAE futhi waba ngumphathi we-Abu Dhabi ku-3 rd kaNovemba we-2004, walandela ubaba wakhe ongasekho, uSheikh Zared Bin Sultan Al Nahyan owadlula emhlabeni kwi-2 nd kaNovemba we-2004.
Ukuphakama kwakhe kwazalwa e-1948 esifundeni esisempumalanga ye-Abu Dhabi futhi wathola imfundo yakhe yamabanga aphansi edolobheni i-Al Ain, okuyisikhungo sokuphatha esifundeni. Uyindodana enkulu kaShelem Zared Bin Sultan Al Nahyan ongasekho kanti umama wakhe nguHercyness Sheikha Hissa Bint Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.
Ubuphakama bakhe buhlobene nesizwe sakwaBani Yas, esithathwa njengesizwe samagama esizweni iningi lama-Arabhu ahlala kulokho okwaziwa namuhla njenge-United Arab Emirates. Lesi sizwe sahola umfelandawonye wezizwe zama-Arabhu, obaziwa ngokuthi yi "Bani Yas Alliance".
Ukuphakama kwakhe kwalandela uyise wakhe ongasekho, uSakhile Zared Bin Sultan Al Nahyan kuzo zonke izigaba zokuphila kwakhe konke. Ukuthunyelwa kokuqala akusebenzayo "kwakungameleli wombusi esifundeni sasempumalanga, kanye nenhloko yezinkantolo lapho" nge-18 th kaSepthemba, 1966. Lesi sikhundla sasibaluleke kakhulu empilweni yakhe. Ngenkathi ukuphakama Kwakhe kuhlala edolobheni lase-Al Ain, wanikezwa ithuba elihle lokuxhumana nezakhamizi zezwe ze-UAE nsuku zonke, ukuba azi ngokugcwele izimo zabo futhi akhombe izifiso zabo namathemba abo.
Ukuphakama kwakhe kwaqokwa njengesikhulu sombhishobhi we-Abu Dhabi ku-1 st kaFebhuwari, i-1969 kanye nenhloko yomnyango wezokuvikela. Ngenxa yalesi sikhundla, uthathe ubuholi bempi yezokuvikela emirate futhi wabamba iqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwayo nasekuyiguquliseni ibutho elincane lezokuphepha laba yisibambiso sokusebenza esisebenza ngemishini yanamuhla.
Emhlanganweni we-1 ngoMeyi, i-1971, uHulumeni wakhe ophakeme u-Sheikh Khalifa ubambe isikhundla sokuba "ngumongameli wekhabethe lokuqala lendawo le-Abu Dhabi" futhi uthathe izingqwembe zokuzivikela kanye nezimali kuleli khabethe.
Ngemuva kokumenyezelwa kombuso wenhlangano, ubuPhakama bakhe basebenza ngokungezelela emithwalweni yakhe yasendaweni isikhundla sokuba “yilowo owayengusekela Mongameli wekhabhinethi Kahulumeni Wobumbano, owakhiwa ngoDisemba we1973.
NgoFebhuwari we1974, futhi kulandela ukumenyezelwa kwekhabethe lendawo, Ukuphakama Kwakhe kwaba ngumongameli wokuqala womkhandlu omkhulu owathatha isikhundla sekhabinet yezithameli kubandakanya nayo yonke imisebenzi yayo.
Ngesikhathi sokusebenza kukamongameli womkhandlu omkhulu, ukuPhatha Kwakhe kwaqalwa futhi kwalandela amaphrojekthi wentuthuko afakaza kuzo zonke izingxenye ze-Abu Dhabi. Ngaphezu kwalokho, ukuphakama Kwakhe kunikeze ukubhekisisa okukhulu ekuthuthukisweni kanye nasekwenziwe kabusha kwamaphrojekthi ezingqalasizinda kanye nezikhungo zemisebenzi eyahlukahlukene. Ubuye futhi wazama ukwakha izinsiza zokuphatha zesimanje, nemithetho ehlanganiswe ngokuphelele, njengoba lokhu kuyisisekelo esiqinile senqubo yokuthuthuka kwezenhlalo nakwezomnotho.
Ngaphezu kwemisebenzi yakhe njengoMongameli womkhandlu omkhulu, ukuPhakama kwakhe kwakuphethe ukusungulwa kanye nobongameli be-Abu Dhabi Investment Authority e-1976. Leli gunya liqondisa ukuphathwa kwezimali zezezimali zabathumeli njengengxenye yombono wenqubo wokuthuthukiswa kwezinsizakusebenza zezimali nokulondolozwa komthombo oholayo wemali ezizukulwaneni ezizayo.
Enye yezinhlelo ezinkulu zentuthuko ezinomthelela omkhulu kwezenhlalo owenziwe yi-He Highness ukusungulwa kwemisebenzi yezenhlalo kanye nomnyango wezezakhiwo wezohwebo, owaziwa kakhulu ngokuthi "IKomidi laseShial Khalifa" Imisebenzi yomnyango isize ukufezekisa ukuthuthuka kwentuthuko yezokwakha emakhunjini ase-Abu Dhabi.
Ukuphakama Kwakhe kuphinde kwathatha isikhundla sokuba yiphini lomkhuzi omkhulu we-UAE Armed Forces kahulumeni wobumbano, lapho enikeze khona ukunakwa okukhethekile nokwandisa isasasa emabuthweni ahlomile. Ngaleyo nkathi, kwenzeka okukhulu eweni lokulethwa, ukuqeqeshwa kanye namandla okubamba ubuchwepheshe besimanje kanye namasu athuthukile ukuthi Ukuphakama Kwakhe kwazama ukukunikeza kuyo yonke imikhakha yamandla anjalo.
Igalelo elibalulekile lenziwa nguKuphakama Kwakhe endaweni yokwakha isivumokholo samasosha, esisuselwa kwizakhiwo zenqubomgomo ephakeme yombuso. Le nqubomgomo ephakeme isuselwe ekwamukelweni kwendlela elinganiselayo, ukungenelela kwezindaba zabanye nokuhlonipha izintshisakalo ezihambisanayo. Ngokubona lezi zinkampani, ukuphakama Kwakhe akulondolozanga mzamo ekubumbeni inqubomgomo yokuvikela egcina ukuzimela, ubukhosi kanye nentshisekelo yombuso. Le nqubomgomo inesandla ekubekeni i-UAE Arces Forces endaweni ethuthukile ethola inhlonipho yomhlaba wonke.
Ngemuva kokuba isikhundla Sakhe sokuphakama sithathe, uhlelo lokuqala lukahulumeni we-UAE lwasungulwa ngaphansi kokubusa kwakhe. Ngaphezu kwalokho, i-His Highness iphinde yethula uhlelo lokuthuthukisa isipiliyoni seziphathimandla zomthetho ukuze kuguqulwe inqubo yokukhetha amalungu omkhandlu kazwelonke wenhlangano ngendlela ezohlanganisa ukhetho nokuqokwa njengesinyathelo sokuqala. Ngokwenza kanjalo, lokhu kuzohlinzeka ekugcineni kosuku ithuba lokukhetha amalungu omkhandlu ngokusebenzisa ukhetho oluqondile.
Ukuphakama Kwakhe kuyayithanda imisebenzi yezemidlalo eyenziwa e-UAE, ikakhulukazi ebholeni. Uzabalaza ukuwaxhasa futhi ahloniphe amaqembu ezemidlalo akuleli azuze izimpumelelo zalapha ekhaya, ezifundeni nakwamanye amazwe.
Isikhundla sakhe esiphakeme uSheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum uthathe igunya lakhe lomthethosisekelo njengePhini likaMongameli kanye noNdunankulu we-UAE ngoJanuwari 5 th, 2006 ngemuva kokuqokwa Kwamalungu oMkhandlu Ophakeme Wokubusa kanye nababusi be-Emirates. Selokhu aqokwa, uhulumeni wobumbano e-UAE ubone ukushesha okumangalisayo kwezinga lokuphumelela kanye nokukhula okukhulu kwenani lezinhlelo zikahulumeni wasekhaya nezamazwe aphesheya ngenxa yokugxila Kwakhe ekutshaleni izinsizakusebenza zikahulumeni kahle nangokufanele .
Ngaphezu kwalokho, ukuphakama Kwakhe kwethule isu Lokuqala likaHulumeni Wombuso e-UAE ngo-Ephreli 17 th, i-2007, elihlose ukufeza ukuthuthuka okuqhubekayo nokunokulinganisela kwesizwe, ngenkathi kubhekwa ukusebenza kwezinhlangano zikahulumeni wobumbano nokuqinisekisa ukuphendula ngendlela esobala ye okuhle kwesizwe kanye nezakhamizi zalo.
Izibopho zePhini Likamongameli we-UAE
IPhini likaMongameli we-UAE lenza yonke imithwalo yemfanelo kamongameli we-UAE kulokhu kungesiphi isizathu.
Umlando Wokuphakama Kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
NgoJanuwari i-4th, i-2006, ukuPhakama kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum kwaba yiMbusi waseDubai kulandela ukushona kukaSakhile Maktoum bin Rashid Al Maktoum.
Kusukela waba yiPhini Likamongameli kanye noNdunankulu wase-UAE, kanye noMbusi WaseDubai, imizamo eqashelayo yethulwe ngezinga elimangazayo.
Ngonyaka u-2007 afakazela impumelelo eyinqayizivele kaSheikh Mohammed ngaphakathi nasendaweni. Ngo-Ephreli 17th, i-2007, uSheikh Mohammed wembula uHlelo Lwamaqhinga Kahulumeni we-UAE ngenhloso yokufeza ukuthuthuka okuqhubekayo ezweni lonke, ukutshala izinsizakusebenza zikahulumeni kahle futhi uqinisekisa ukukhuthala, ukubika nokucacisa yonke imigwamanda yenhlangano.
Inhloso yaleso sisekelo ukukhuthaza intuthuko yabantu ngokutshala imali kwezemfundo kanye nentuthuko yolwazi esifundeni ngokutshala abaholi bakusasa kuzona zombili izinhlaka ezizimele nezomphakathi, ukuthuthukisa ucwaningo lwesayensi, ukusabalalisa ulwazi, ukukhuthaza ubuholi bebhizinisi, ukuhlomisa abantu abasha, ukuvuselela umqondo wokuthi isiko, ukulondolozwa kwamagugu nokukhuthaza izinkundla zokuqonda phakathi kwamasiko ahlukahlukene.